နောက်နှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာပျက်တော့မလား ~ Nge Naing
နောက်နှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာပျက်တော့မလား
Wednesday, June 29, 2011 Nge Naing 47 comments
၂၀၁၂ ခု၊ ဒီဇင်ဘာမှာ ကမ္ဘာပျက်မပျက် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Tag ပို့စ်ကို ကျွန်မ တင်ခဲ့ပေမဲ့ ပို့စ်တင်တဲ့ အချိန်တုန်းက Nibiru လို့ခေါ်တဲ့ ဂြိုလ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ ဖတ်ဖူးတာ မဟုတ်ဘဲ သူများ Tag လာတဲ့ ပို့စ်တွေမှာ သိရသမျှ၊ ကြားရသမျှ နဲ့ဘဲ ရေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ Planet Nibiru နဲ့ ပတ်သက်ပြီး myanmar astronomy ကတင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို ကိုကိုးအိမ်က ပြန်လည်ဖေါ်ပြထားတာကို တွေ့လို့ ဖတ်မိတော့ အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ဒီပို့စ်ကို တင်တဲ့ကာလနဲ့ အခုလက်ရှိ ကာလကြား ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ Planet Nibiru နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောထားတဲ့အတိုင်း ငလျှင်လှုပ်ခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ ဆူနာမီရေလှိုင်းတွေ ရိုက်ခတ်ခြင်းတွေကို ကမ္ဘာ့ဒေသ အတော်များများမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရယ်တချို့က ကျွန်မကို တကယ်ပဲ စိတ်ဝင်စားစေပြီး ဒီပို့စ်ကို ပြန်ဖေါ်ပြဖြစ်အောင် စေ့ဆော်လာပါတယ်။ ဒါတကယ်ပဲ ဖြစ်လာမလား ဖြစ်လာနိုင်မနိုင်ကို ဘယ်သူက ဘယ်လို အတိအကျ ပြောနိုင်မလဲ ဆိုတာ တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်နေတယ်။ ၁၀၁၂ ကူးမည့် အခုလာမည့် New Year က ကျွန်မတို့အတွက် Happy New Year ဖြစ်မလား Uncertain New Year ဖြစ်မလားဆိုတာတော့ တကယ်ကို တွေးတောဆင်ခြင်ဖို့ လိုနေတာအမှန်ပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မ ပို့စ်အသစ် ရေးမအားသေးတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီပို့စ်ကို ကျွန်မရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်နဲ့တွဲပြီး အသစ်ပြန်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ရေးတဲ့ပို့စ်က အခုဒီပို့စ်မှာ ပို့စ်ပိုင်ရှင် ခွန်းမေးထားတဲ့ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုထင်သလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Tag ပြီး မေးလာတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဟာသအနေနဲ့ နောက်ပြီး ပြန်ဖြေထားတဲ့ အပိုင်းကလွဲရင် အပေါ်ပိုင်းတခုလုံးက ကျွန်မအတည်ရေးထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ သဘောထားအမှန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကို တင်သင့် မတင်သင့် တော်တော်စဉ်းစားပြီးမှ တင်လိုက်တာပါ။
အခြား အကြောင်းအရာတွေက ကိစ္စမရှိပေမယ့် ဒီအကြောင်းအရာက သေချာ
မစဉ်းစားရင် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေလို့ပါ။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်တဲ့ သူတိုင်း
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့တဲ့ ကာလာမသုတ်ကို နှလုံးသွင်းပါလို့ ပြောပါရစေ။
အခု ကျနော်ရေးမယ့် အကြောင်းအရာက ကြည့်မိတဲ့ သူတွေအကြားမှာ လှုပ်လှုပ်
ရှားရှား ဖြစ်သွားစေတဲ့ စကြာဝဠာနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ YouTube video တွေအကြောင်း
ပါ။ အဓိက အကြောင်းအရာက ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ် ဆိုတဲ့
ကိစ္စပါ။ အဲဒီ ဗွီဒီယိုတွေကို Doomsday, Nibiru, Planet X, 2012 December 21
ဆိုတဲ့ keyword တွေနဲ့ အလွယ်တကူ ရှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေ ပြောကြတဲ့
ဦးတည်ချက်က တစ်ခုတည်းပါ။ ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ
ပါ။ ဘာကြောင့် ပျက်မှာလဲ။ ဘယ်လိုပျက်မှာလဲ။ သူတို့ရေးတဲ့ အတိုင်း ကျနော်
ပြန်ရေးပါ့မယ်။ အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ ကျနော့် စာသား
မဟုတ်ပါ။ သူတို့ရေးထားတာကို တိုက်ရိုက်ဘာသာ ပြန်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ပေရှည် နေတာတွေကို ဖျက် ထုတ်ခဲ့ပါတယ်)
ကမ္ဘာပေါ်က အချို့သော အကြောင်းအရာတွေဟာ ရှင်းပြနိုင်တဲ့ အကြောင်း
အရာတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဥပမာ - Stonehenge နဲ့ Easter Island တို့လို
ပေါ့၊ သေချာ ရှင်းမပြနိုင်တဲ့ အရာတွေ အဖြစ် ယနေ့ထိ ရှိနေဆဲပါ။
သူတို့ကို ဘယ်သူ တည်ဆောက်ခဲ့တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လို ဖြစ်လာခဲ့တယ်
ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ရာနှုန်းပြည့် မပြောနိုင်ပါဘူး။ (ပုံမှာ Stonehenge နဲ့
Easter Island ပေါ်က အရုပ်တွေကို ပြထားပါတယ်။ Easter Island က
သြစတေးလျ နဲ့ ချီလီ အကြားက ပစိဖိတ်ရေပြင်ကျယ် ကြီး အလယ်လောက်
မှာ ရှိတာ၊ ဘယ်တုန်းကများ ရှေးဟောင်းလူတွေ ရောက်ပြီး ဒါတွေ လုပ်သွား
လဲ.. ကျနော်လည်း အံ့သြော် မိပါတယ်)။ ကျနော် အခုရှင်းပြမယ့် အကြောင်းအရာ
ကလည်း သေချာ ရှင်းမပြနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာ ကြီးပျက်မယ့်
နေ့စွဲကို ပြောတာပါ။ အဲဒီ နေ့စွဲက ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့လို့ ပြောလိုက်တဲ့အတွက် ကျနော့်လိုပဲ ခင်ဗျားလည်း အံ့အားသင့်
ဒါပေမယ့် NASA နဲ့ Governments တွေကတော့ အံ့အား သင့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်ကတည်းက ဒီအကြောင်းကို သိနေကြ
နှင့်ပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဘာကို သိနေကြ တာပါလဲ။ အခုဘယ်သူတွေက ကျနော်တို့
ကမ္ဘာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သတိပေးခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကြည့်ကြ ရအောင်ပါ။
Nostradamus ကပြောပါတယ်၊ စကြာဝဠာအတွင်းက ကြီးမားလှတဲ့ အရာဝတ္ထု
တစ်ခုဟာ ကျနော်တို့ ကမ္ဘာဆီကို ဦးတည်ပြီး လာနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့
နေပါတ်လမ်းဟာ နှစ်ပေါင်း ၃၆၀၀ မှာ တစ်ပါတ် ပြည့်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ
ကျနော်တို့ ဆီကို ရောက်ပါမယ်၊ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကို ဝင်တိုက်မိမှာတော့
မဟုတ်ပါဘူး။ Albert Einstein က pole shift နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သတိပေး
ခဲ့ပါတယ်။ pole shifting အချိန်မှာ လူသားတွေ အပြင်းအထန် ခံစားရမယ်
ဆိုတာပါ။ မာယန် ပရောဖက် တွေရဲ့ The Tzolkin ဆိုတဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်
ဟာ အဆုံးသတ် အမှတ် ဖြစ်နေပါတယ်။ စက်ဝန်းကြီး တစ်ခုရဲ့ အဆုံးမှတ် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ စက်ဝန်းကြီးက အစမှတ် (day 0.0.0.0.0) 11th August 3114 BC မှာ
စတင်ပြီး အဆုံးမှတ် (day 13.0.0.0.0) 21st December 2012 AD မှာ ဆုံးပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၃၆၀၀ ပြည့်တိုင်း စက်ဝန်းကြီး တစ်ပါတ်လည် ပါတယ်။ holy bible
ကလည်း 2012 ခုနှစ်ကို သတိပေးထားပါတယ်။ အခြားအခြား သော အရာတွေ
အားလုံးမှာလည်း 2012 December 21 ကို ရည်ညွှန်းထားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
မေးခွန်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၂ မှာ သေချာပေါက် ဖြစ်မှာမှန်း သိရက်နဲ့
ဘာကြောင့် နာဆာက လူတွေကို အသိမပေးတာလဲ။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က
လူသားတွေ အားလုံး သိသွားကြရင် လူတွေ အားလုံး အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ရေး
ကြိုးပမ်းကြတဲ့အခါ သူတို့အတွက် အခွင့်အလမ်း နည်းသွားမှာ စိုးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဖော်ပြမဲ့ အကြောင်းအရာက NASA ဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ဘယ်
တွေ့ရှိချက်ကို လျှို့ဝှက်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာပါ။ 1982 ခုနှစ်မှာ NASA ဟာ
extra solar planet တစ်ခုကို စပြီး သတိထား မိခဲ့ပါတယ်။ 1983 ခုနှစ်မှာ
NASA ဟာ IRAS (Infrared Astronomical Satellite) ကို လွှတ်တင်ခဲ့ပြီးတော့
အဲဒီ satellite က ဂျူပီတာဂြိုဟ်လောက် ကြီးမားတဲ့ object တစ်ခုကို တွေ့
အဲဒီ Object ကို Planet X (Nibiru) လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ planet Nibiru ဟာ ကမ္ဘာနဲ့ နေရဲ့အကြားကို ဝင်ရောက်
ဖြတ်သန်း ပါမယ်။ သူ ဖြတ်သန်းမယ့် အနေအထား ကတော့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့
အတိုင်းပါပဲ။ အဲဒီ အချက်ကြောင့် Atlantis မြို့ကြီး နစ်မြုပ်ခဲ့သလို Noah ရဲ့
လှေကြီး တစ်ခုပဲ ရေပေါ်မှာ ရှိခဲ့တုန်းကလို အခြေ အနေမျိုး ၂၀၁၂ နောင်းပိုင်းမှာ
ပြန်ဖြစ်လာပါမယ်။ ကျနော်တို့မှာ ရှောင်လွှဲစရာ နည်းလမ်း မရှိပါဘူး။ နေစရာ
ကမ္ဘာ တစ်ခုပဲ ရှိတဲ့အတွက် မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင် ရပါလိမ့်မယ်။ Stonehenge နဲ့
Easter Island အကြောင်း ကျနော်တို့ ဘာလို့ မသိတာလဲ။ ဖြစ်နိုင်တာက
အရင်က လူတွေ တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Nibiru ကြောင့် သူတို့အားလုံး
သေဆုံးသွားတဲ့အခါ အသစ် ဖြစ်လာတဲ့ ကျနော်တို့က မသိတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Nibiru ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ အနီရောင် အရာဝတ္ထုအဖြစ်
သာမာန် မျက်လုံးနဲ့ မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ အပေါ်ကို တက်လာနေတာ ဖြစ်တဲ့
အတွက် ကမ္ဘာ့ တောင်ဘက် အဖျားပိုင်းတွေမှာသာ မြင်နိုင်မှာပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
မေလလောက်မှာတော့ သူဟာ ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေ အားလုံးမြင်နိုင်လောက်တဲ့
အရွယ်အစား ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယမြောက် နေတစ်လုံးအဖြစ် လရဲ့
အရွယ်အစား လောက် ရှိတဲ့ သူ့ကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကြီးမားလှတဲ့ ဆွဲငင်အားကြောင့်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငလျှင် အကြီးအကျယ် လှုပ်ပြီး ရေကြီးမှုတွေ နေရာ အနှံ့ ဖြစ်ပါမယ်။
ဒါပေမယ့် အဆိုးဆုံး အခြေအနေက ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် ဖြစ်ပြီးတော့
အဲဒီနေ့မှာ ကမ္ဘာဟာ Nibiru နဲ့ နေရဲ့အကြားကို ရောက်ပါမယ်။ ဆန့်ကျင်
ဆွဲငင်အားတွေကြောင့် ကမ္ဘာမှာ pole shifting အကြီး အကျယ် ဖြစ်ပြီး
အဲဒီဖြစ်ရပ်က ကမ္ဘာကို အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း စေမှာပါ။ Nibiru ဟာ ကမ္ဘာလည်
ပါတ်မှုနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လားရာကို လည် နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်နှာပြင်
ဆွဲငင်အားက ကမ္ဘာကြီးကို ၃ရက်တိတိ လည်ပါတ်မှု ရပ်သွားစေပါမယ်။
အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ငလျှင်ကြီးတွေ လှုပ်မယ်၊ မြေပြန့်တွေ အစိတ်စိတ်
အပိုင်းပိုင်း ကွဲထွက်ပြီး ကျောက်ရည်ပူတွေ တိုးထွက်မယ်၊ မီးတောင်တွေ
နေရာအနှံ့ ပေါက်ကွဲမယ်၊ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်းရာပေါင်း အနည်းငယ်သာ
အသက်ရှင် ကျန်ပါမယ်။ အဲဒီနောက် ကမ္ဘာကြီးဟာ ဖြေးဖြေးချင်း အသစ်ပြန်လည်
ဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မယ်။ 2014 July 1 ရက်နေ့က စပြီး Nibiru ဟာ ကျနော် ကမ္ဘာပေါ်မှာ
ဘာသက်ရောက်မှုမှ မရှိတော့ပဲ ကျနော်တို့နဲ့ ဝေးရာ စကြာဝဠာဆီကို ပြန်လည်
အပေါ်မှာ ရေးပြခဲ့တာတွေကတော့ YouTube video တွေထဲက တစ်ခုကို
ဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးသည် သင်္ခါရ ဆိုပေမဲ့
၂၀၁၂ ဆိုတာတော့ တော်တော်ကြီးများ စောလွန်း နေမလားလို့။ အခုစာလာ
ဖတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ရော.. ဒီကိစ္စကို ယုံလား။ paranormal.about.com မှာ
အဲဒီ အကြောင်း pool လုပ်ထားတဲ့ result ကို အပေါ်ကပုံမှာ တွေ့နိုင် ပါတယ်။
ယုံကြည်တယ်၊ ဘာကြောင့်၊ မယုံ ကြည်ဘူး၊ ဘာကြောင့် ဆိုတာလေး comment
ရေးပေး စေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော့်အမြင်ကိုလည်း ပို့စ် တစ်ခုတင်ပြီး ရှင်းပေးပါ့
ကျွန်တော်ကတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက် လုံးဝလုံးဝမယုံပါ॥
ကမ္ဘာဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းအပေါ် သိပ္ပံအထောက်အထားနဲ့ ဗုဒ္ဓတရား
(31/10/09) တုန်းက တင်တဲ့ ကျွန်မပို့စ်
ကမ္ဘာပျက်တဲ့အကြောင်း ပြောရင် ကမ္ဘာ စတဲ့အကြောင်းလည်း မပါလို့ မဖြစ်ဘူး ထင်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရား အရဖြစ်စေ၊သိပ္ပံ အထောက်အထားများအရ ဖြစ်စေ အခုလက်ရှိ ကျွန်မတို့ နေထိုင်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ အစဉ် ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ကိုအောင်သာငယ်က ကမ္ဘာမပျက်ခင် တလအလို ကာလမှာ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Tag ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မဖြေခင် ကျွန်မ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သိပ္ပံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Assignment တွေအထဲက သိရတဲ့ အချက်အလက်တွေအရရော ဖတ်ဖူးတဲ့ ဘုရားဟောတရားအရပါ ပြန်သုံးသပ်ပြီး ကမ္ဘာဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်တဲ့ Fact ကိုအရင် တင်ပြပြီးမှ မေးခွန်းတွေကို ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ပါတဲ့ အချက်တချို့ကို ကိုအောင်သာငယ်ရဲ့ ပို့စ်တခုက မှတ်ချက်မှာလည်း ကျွန်မ ရေးဖူးပါတယ်။ အချက်အလက်တွေကို စိတ်မ၀င်စားသူများအနေနဲ့ ဒါကို ကျော်ဖတ်ပြီး Tag ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေဆီ တန်းသွားလို့ ရပါတယ်။
သိပ္ပံဆိုင်ရာ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း လေ့လာမှုအရ ဒီကမ္ဘာကြီးက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄.၅ ဘီလီယံက စခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကမ္ဘာကိုစပြီးနောက် သက်ရှိသတ္တ၀ါဆိုတာ မပေါ်ခင် ဓါတုဗေဒမှာ ကျွန်မတို့ သင်ခဲ့ရတဲ့ သက်ရှိဓါတ်ပေါင်း (organic compund) တွေ ဖြစ်လာဖို့ အချိန်တော်တော် ယူရပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီး စခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးကို သံတို့ ကြေးတို့လို ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲ တွေပါတဲ့ inorganic compound (သက်မဲ့ ဓါတ်ပေါင်း) တွေနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းထားပြီး သက်ရှိတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကာဗွန်၊ အောက်စီဂျင်၊ နိုက်ထရိုဂျင်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင် စတဲ့ organic compound (သက်ရှိဓါတ်ပေါင်း) တွေက Evolution နည်းအရ နှစ်ကာလ အတော်ကြာပြီးမှ တရွေ့ရွေ့ ပြောင်းလဲနည်းနဲ့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ အောက်စီဂျင်မရှိပဲနဲ့ လူတွေ အသက်ရှင်လို့ မရသလို ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက် မရှိပဲနဲ့ အပင်တွေ အသက်ရှင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒါတွေ ဖြစ်လာပြီးမှ အဲဒီက ဓါတ်ပေါင်းတွေက တဖန် တရွေ့ရွေ့ပြောင်းတဲ့နည်းနဲ့ ဘက်တီးရီးယားလို သေးငယ်တဲ့အရွယ် သတ္တ၀ါကနေ အကြီးတွေ အဲဒီကတဆင့် ဒီလိုပဲ တရွေ့ရွေ့ ထပ်ပြောင်းရင်းနဲ့ လူနဲ့တူတဲ့ အကောင်တွ ဖြစ်လာပြီးမှ လူသားအဆင့် ရောက်ဖို့က အများကြီး ထပ်ကြာသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာရေးအရ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့တဲ့ ရခဲ့လှတဲ့ အရာတွေထဲမှာ လူ့အဖြစ်ဟာ ရခဲတယ်လို့ ဘုရားဟောခဲ့တာဟာ သိပ္ပံအထောက်အထားအရလည်း တကယ်ကို မှန်ကန်နေပါတယ်။
ဒီလိုသက်မဲ့ ဓါတ်ပေါင်း ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲတွေနဲ့ ကမ္ဘာကို နှစ်ပေါင်း ၄.၅ ဘီလီယံက စပြီး သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃.၈ ဘီလီယံကမှ စတင်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီအထဲမှာမှ လူ၊ မျောက်အပါအ၀င် Hominidae family လို့ခေါ်တဲ့ လူနဲ့တူတဲ့ ခြေနှစ်ချောင်းပေါ်မှာ မတ်တတ်ရပ်ပြီး သွားနိုင်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် နှစ်သန်းပေါင်း ၂၀ ခန့် Cainozoic ခေတ်မှာမှ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ လူနဲ့ လူလိုသတ္တ၀ါတွေမတိုင်ခင် နောက်ဆုံးခေတ် Mesozoic ခေတ်မှာ နှစ်သန်းပေါင်း ၁၈၀ ခန့်က ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ဒိုင်နိုဆောတွေ ဒီကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်။ ဒီမတိုင်ခင် ခေတ်အဆက်ဆက်ကို လေ့လာပါက Palaeozoic ခေတ်မှာ သန်းပေါင်း ၆၀၀ ခန့်က ကျောရိုးမဲ့သတ္တ၀ါတွေ၊ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၄၀ ခန့်က မေးရိုးပါတဲ့ ငါးမျိုးတွေ၊ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၀၀ ခန့်က အင်းဆက်ပိုးကောင်တွေ၊ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၀၀ ခန့်က ကျောရိုးရှိပြီးသား တွားသွားသတ္တ၀ါတွေ။ နှစ်သန်းပေါင်း ၂၅၀ ခန့်က ဒိုင်နိုဆော နို့တိုက်သတ္တ၀ါတွေ ကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများရဲ့ သက်တမ်းကို တွက်ချက်ပြီး သိရပါတယ်။ သိပ္ပံ အထောက်အထားများအရ ခေတ်တခုခုကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေ ပျက်စီးပြီး နှစ်သန်းပေါင်း အတော်ကြာ အချိန်ပြန်ယူပြီးမှ Organic compound တွေ ပြန်ရ၊ သတ္တ၀ါတွေ ပြန်ဖြစ်ပြီး Evolution ဆိုတဲ့ တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲပြီးမှ သတ္တ၀ါကို အသစ်ကနေပြန်စတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာပျက်ပြီးလို့ နှစ်သန်းနဲ့ ချီပြီးမှ လူသတ္တ၀ါတွေကို ပြန်ဖြစ်ပေါ်စေတာ ဖြစ်တယ်။
ဒါကတော့ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသမျှ သိပ္ပံအထောက်အထားများသာ ဖြစ်ပြီး နှစ်သန်းပေါင်း ၆၀၀ မတိုင်ခင်က သက်ရှိတွေရဲ့ အထောက်အထားကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ ကြားကာလတွေမှာလည်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေ မတွေ့သေးတာ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ အလုံးစုံကို သိတော်မူခဲ့တဲ့ မြတ်စွာဘုရားကတော့ အကုန်လုံးကို သိသွားခဲ့ပေမယ့် ဟောဖို့လိုအပ်တဲ့ တရားတွေကိုပဲ ဟောခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပ္ပံအထောက်အထားနဲ့ ဗုဒ္ဓတရားက သိပ်ပြီး မကွာခြားလှတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက အဖန်တလဲလဲ မပြတ်ပျက်စီးလိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက် ဖြစ်တဲ့ သံသရာကြီးဟာ သိပ်ရှည်ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာဟာ မရေတွက်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါင်း မြောက်များစွာထဲက တခုသာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဟောထားခဲ့ပါတယ်။ အရင်အရင် ကမ္ဘာတွေတုန်းကလည်း လူသတ္တ၀ါတွေဟာ တကွေ့ကွေ့မှာ ကြုံဖူး၊ သိဖူး၊ သားအမိ၊ ချစ်သူ၊ မောင်နှမ မဖြစ်ဖူးသူ တယောက်မှ မရှိခဲ့လို့ သတ္တ၀ါတိုင်း (တိရိစ္ဆာန်အပါအ၀င်) ကို မိဘ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမလို မေတ္တာထားဖို့ ဟောခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာပျက်တယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း ရေခဲဖုံးလွှမ်းခြင်း စတာတွေအမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပြီး လုံးဝ ပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ပဲ ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက်နဲ့ နာလိုက် နလံပြန်ထလိုက် ဖြစ်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် အခုရေပေါ်မှာ ရောက်နေတဲ့ ကုန်းမြေတွေက ရေအောက် ပြန်ရောက်ပြီး ရေအောက် ရောက်နေတဲ့အပိုင်းက ကုန်းပေါ် ပြန်ရောက်တာမျိုး၊ ဆက်နေတဲ့ ကုန်းမြေတခုခုဟာ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်သွားပြီး ကျွန်းအသေးတွေ ဒါမှမဟုတ် ရေအောက်မြှုပ်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သြစတြေးလျားနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အခုသဲကန္တာရ ရှိတဲ့နေရာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် သန်း ၄၀၀ ခန့်က ရေအာက်မှာရှိခဲ့ပါတယ်လို့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ တကယ်လုံးဝ ပျက်စီးခြင်းဆိုတာလည်း တချိန်ချိန်မှာ ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကြီး လုံးဝမပျက်စီးခင် ဒီကမ္ဘာမှာ အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရားတဆူ ပွင့်ဖို့ ရှိသေးတယ်လို့ ဟောထားတဲ့အတွက် အခုချိန်မှာ လုံးဝပျက်စီးသွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။
နောက်တချက်က အရိမေတ္တယျ ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာ လူတွေရဲ့ သက်တမ်းက အနှစ်တသောင်း ရှိတယ်လို့သိရတော့ အဲဒီအခြေအနေကို ရောက်ဖို့ အချိန် အတော်ကြာဦးမှာ ဖြစ်လို့ ကျွန်မတို့ အခုဘ၀မှာတော့ နောက်ပွင့်မည့် ဘုရားကို တွေ့ရဖို့ မရှိသေးဘူး။ ဘုရားမပွင့်ခင် ကမ္ဘာကို ဆေးကြောသန့်စင်ရင်လည်း သာသနာ ရှင်သန်နေတဲ့အထိ သူတော်ကောင်းတွေဟာ ရှိနေဦးမှာဖြစ်လို့ သာသနာကွယ်ပြီး အတော်ကြာ လူတွေဟာ အကျင့်စာရိတ္တတွေ လုံးဝပျက်ပြားနေတဲ့ အချိန်မှသာ ကမ္ဘာကို ဆေးကျောတာ ကမ္ဘာပျက်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သာသနာက အနှစ် ငါးထောင်တောင် မပြည့်သေးဘူး အနှစ်ငါးထောင် ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်း သာသနာ ပျက်ပြီးမှ ကမ္ဘာ တခုခု ဖြစ်ဖို့ ရှိတယ်ဆိုတာလည်း သိထားတယ်။ အခုထိ ဝေနေယျ သတ္တ၀ါတွေအတွက် နေ့တိုင်းမေတ္တာပို့ပေးနေတဲ့ လူနဲ့ ရဟန်း သူတော်ကောင်းတွေ ရှိနေဆဲမို့ သာသနာက ရှင်သန်ဆဲ၊ ဘာသာခြားတွေမှာလည်း စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းတွေ အများကြီး ရှိနေဆဲဆိုတော့ ပုံမှန်အတိုင်း မီးစာကုန် ဆီခမ်းမှ သက်တမ်းကုန်ရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာက အခုလာမည့် ၂၀၁၂ မှာ ပျက်ဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကိုးအကားတွေက တခြား သာသာဝင်တွေအတွက် အနှစ်သာရ မရှိနိုင်၊ အကျုံးမ၀င်နိုင်လို့ ဘာသာရေးနဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်တာကို ကျွန်မနည်းနည်း ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ရုပ်ရှင်ကြော်ငြာကို ကိုအိုးဝေအောင် ဘလောဂ်မှာ ကျွန်မ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဖြစ်ရင် မဖြစ်ခင် ကြိုရှောင်လို့ပဲ ရနိုင်လိမ့်မယ်၊ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကို တိုက်မိမှတော့ တိုက်မိတဲ့အရှိန်၊ ပေါက်ကွဲတဲ့ အရှိန်တွေကြောင့် လျှပ်စစ်လှိုင်း လေထုဖိအား၊ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲအားတွေ ဆိုရင် ပုံမှန်အတိုင်း ဘယ်လိုမှ မဟုတ်နိုင်တော့လို့ ဒီဗွီဒယိုထဲကလို ဖြစ်တဲ့အချိန်မှ လေယဉ်နဲ့ ထွက်ပြေးလို့ ဘယ်လိုမှ ရနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ပရိတ်သတ် စိတ်ဝင်စားအောင် ရိုက်ပြထားတာပဲ ဖြစ်နိုင်ပါထင်တယ်။
ပြီးတော့ ၂၀၁၂ ဆိုတာ သိပ်ကို နီးနေပါပြီ။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ အစိုးရတွေက ဒီကိစ္စကို အရေးတကြီးထားပြီး ဘာကြောင့် မဆွေးနွေးနေကြတာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပျက်ဖို့ အခြေအနေကို အမှန်တကယ် တွန်းအားပေးနေတဲ့ သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ ကမ္ဘာပူနွေးလာမှုကြောင့် ၀င်ရိုးစွန်းဒေသ ရေခဲ ပျော်လာမှုနဲ့ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာရေ မြင့်တက်လာမှု၊ သဘာဝတွင်းထွက် စွမ်းအင်တွေက ရတဲ့ လောင်စာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်သိမ်းပြီး ဇိဝလောင်စာ တီတွင်သုံးစွဲမှု စတဲ့ အဝေးကြီးကြာမှ ကမ္ဘာပျက်နိုင်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့ပဲ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေက အဓိက ဆွေးနွေးနေကြတယ်။ သိပ္ပံဘာသာ တက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကလည်း Assignment တွေမှာ ဒီပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ် ဆိုတာပဲ Research တွေလုပ်ပြီး ဖေါ်ပြနေရတယ်။ မကြာခင်ဖြစ်မှာ ဖြစ်လာတော့မယ့် နောက်သုံးနှစ်ကြာမှာ ကမ္ဘာပျက်မည့် အကြောင်းအရာကိုတော့ ဘယ်သူမှ ဘာမှ ဆွေးလည်းမဆွေးနွေး အရေးလည်းမထားတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၂၀၁၂ ကိစ္စဟာ ဘာမှ အခြေအမြစ်မရှိတာကို သက်သေပြနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နေအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အာကာသ ဟင်းလင်းပြင်ထဲကို လမ်းကြောင်းမှားပြီး ၀င်လာနေတယ်လို့ ကြားထားတဲ့ ဂြိုလ်တခုဆိုတာကိုလည်း သပ္ပံပညာရှင်တွေက တနည်းနည်းနဲ့ ရှောင်နိုင်ရှားနိုင်အောင် လုပ်ထားနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အိုမှ နာမှ မဟုတ်ပဲ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်တွေလည်း တစုံတခုကြောင့် သေကြေ ပျက်စီးနေတာတွေကို မကြာခဏ တွေ့နေရတယ်။ မျက်စိတမှိတ် လျှပ်တပြက်အတွင်း ကွေးသောလက် မဆန့်မီ ဆန့်သောလက် မကွေးမီ အချိန်မရွေး တခုခု ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်း ဘုရားက ဟောထားတာ ရှိသေးတော့ ကမ္ဘာမပျက်သေးဘူး ဆိုတာကိုလည်း လုံးဝ ယုံကြည်စိတ်ချနေလို့လည်း မဖြစ်သေး။ ဒါကြောင့်မို့ မိုမပြို ပြိုခဲ့သည် ရှိသော်၊ အကယ်၍များ များပျက်ခဲ့သည် ရှိသော် မပျက်ခင်တလမှာ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့အတွက် စိတ်ကူးယဉ် အခန်းကဏ္ဍကို စတင်လိုက်ပါပြီ။
ကျွန်မ ဘယ်သူနဲ့မှ မတွေ့ချင်ဘူး။ ကျွန်မသားလေးတယောက်ကို ရင်ခွင်ထဲမှာ ပိုက်ထားပြီး သားလေးကိုပဲ တရားဓမ္မအကြောင်းတွေ ဘာမှ မတည်မြဲဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြလိုက် တရားမှတ်လိုက်နဲ့ အချိန်ကုန်ချင်တယ်။
သားလေးမှာ သာသနာနဲ့ ကြုံတဲ့အချိန် နည်းလိုက်တာလို့ပဲ တွေးပြီး ခံစားမိလိမ့်မယ်။
ဘုရားအဆုံးအမ တွေကလွဲပြီး ဘာမှ ပြင်ဆင်ထားဖြစ်မယ် မထင်ဘူး။
အသက် ၄၀ မှ လူ့ဘ၀ကို စမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားတော့ လူ့ဘ၀ စပြီး မကြာခင်မှာပဲ ချက်ချင်း သေရတော့မှာကို ၀မ်းနည်းမိတယ်။ သံသရာမှာ ဘယ်တော့မှ သာသနာနဲ့ မလွဲရအောင် သာသနာနဲ့ ကြုံတုန်းကြုံခိုက် အနှိမ့်ဆုံး သောတာပန် အဆင့်လေးအထိတောင် မရယူလိုက်နိုင်တာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ရရှုံးတယ်ဆိုတာ တွေးပြီး ၀မ်းနည်းမိလိမ့်မယ်။
သားလေးအတွက် စားစရာ သောက်စရာတချို့ ဘုရားပုံတချို့ကလွဲပြီး တခြားဘာမှ မဆောင်ထားချင်ဘူး။
ဘယ်သူမှ ဆက်ပြီး အသက်ရှင်ကျန်နေဖို့ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဘာမှ ရေးဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် တခုတော့ရှိတယ် ကမ္ဘာမပျက်ခင် သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ တိုင်ပင်ပြီး လူသားမျိုးနွယ်ကို နှစ်သန်းနဲ့ ချီပြီးမှ ပြန်စရတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် လူသားမျိုးနွယ်ကို စောင့်ထိန်းဖို့ အစီစဉ်တခု လုပ်ရင်လုပ်နိုင်တယ်။ အဲဒီအစီစဉ်က လက်ရှိ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ သိပ္ပံပညာတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ သိပ္ပံပညာရှင် တချို့နဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ကို ဆက်ထိန်းဖို့ တနိုင်ငံကို လူနည်းနည်းစီ အနည်းဆုံးတော့ တနိုင်ငံကို ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ လူငယ်စုံတွဲ တတွဲစီခန့် လကမ္ဘာမှာ Stay ခဏသွားရှောင်ဖို့ ၀န်ဆောင်ပေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အဲဒီလို ဆင်တူရိုးမား အစီစဉ် တခုခု ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ စီစဉ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်မှာ အကုန်လုံးတော့ အသေခံမယ် မထင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မသာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒါမှမဟုတ် ကြီးငါးကြီးနိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒါကို မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့ အကြံပြုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကုလသမဂ္ဂက မဆောင်ရွက်ရင်တောင်မှ အနည်းဆုံးတော့ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် မိသားစုတွေတော့ ဒီလို တိမ်းရှောင်ပြီး အသက်ရှင် ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အသက်ရှင် ကျန်နေခဲ့သူတွေအတွက် အင်တာနက်ကနေ ဖတ်လို့ရအောင် သေတမ်းစာတခု Message ထားခဲ့ချင်တယ်။ နောက်ထပ် ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့ ကမ္ဘာမှာ လူသားမျိုးနွယ်တွေဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ နေဖို့ ဗီတိုအာဏာမရှိတဲ့ တကယ်ကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျတဲ့ ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကို ဖွဲ့ဖို့ သေတမ်းစာတခု ရေးခဲ့ချင်တယ်။
သာသနာနဲ့ နောက်ထပ် ထပ်ကြုံဖို့ဆိုတာ မသေချာတော့ဘူး ထပ်ကြုံဖို့နေနေသာသာ ကမ္ဘာပျက်သွားပြီးရင် အပေါ်က အချက်အလက်တွေအရ လူပြန်ဖြစ်ဖို့က သိပ်ကိုမလွယ်တော့ဘူး။ လူဖြစ်ဖို့ နေနေသာသာ သတ္တ၀ါ တခုခု ပြန်ပေါ်ပေါက်ဖို့တောင် နှစ်က သန်းနဲ့ချီကြာဦးမယ်။ နတ်ပြည်လို ကိလေသာ များလွန်းတဲ့ နေရာကိုလည်း မရောက်ချင်ဘူး။ ဘုရားစာအုပ်ထဲမှာတော့ ကမ္ဘာပျက်ခါနီး လူတွေဟာ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ ပွားများပြီး ဗြဟ္မာစိုရ်တရားတွေ ထားလွန်းလို့ ဗြဟ္မာပြည်ကို ရောက်တာများတယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဗြဟ္မာပြည်ရောက်ရင်လည်း ရုပ်မရှိဘဲ နာမ်သက်သက်ရှိတဲ့ အရူပဘုံနဲ့ နာမ်မရှိပဲ ရုပ်သက်သက်ဘဲ ရှိတဲ့ ရှုပဘုံကိုသွားရောက်ရင်တော့ ဒုက္ခပဲ လို့တွေးနေမိမှာ ဖြစ်ပြီး လူပြန်မဖြစ်ခင်စပ်ကြား အဲဒီ ကြားကာလအချိ်န်မှာ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ဒိုင်နိုဆော ဖြစ်နေရင်လည်း အကောင်းသားလို့ တွေးနေမိလိမ့်မယ်။
ဂုဏ်ယူရလောက်တာ ဘာတခုမှ မလုပ်သွားရလို့ ဂုဏ်ယူစရာတော့ သိပ်မရှိလှဘူး။ ဒါပေမယ့် တခုတော့ရှိတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေကလည်း အဲဒီအချိန်လောက်ဆို တရားတွေရပြီး သံဃာတွေကို ဓါတ်တိုင်မှာ ကြိုးချည်ရိုက်နှက်တာကအစ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ သံဃာ သတ်ထားတာတွေအတွက် မှားကြောင်း တောင်းပန်ပြီး ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ပြည်သူလူထု တောင်းဆိုတာကိုလည်း အကုန်လုံး လိုက်လျောပြီး အဖသတ်တဲ့ အဇာတသတ် မသေခင်ကလို တရားဓမ္မနဲ့ နေလို့ ပြည်သူလူထုကလည်း သူ့တရား သူစီရင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး အာဃာတ မထားတော့ပဲ ကမ္ဘာပျက်ခါနီး အားလုံးမှာ တရားဓမ္မနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုရှိတဲ့ မြန်မာပြည်ဟာ လုံးဝငြိမ်းချမ်းနေမှာ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမှာ စံပြအထားရဆုံး နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲလို အခြေအနေဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာပျက်ခါနီး သေအံ့ဆဲဆဲမှာတောင်မှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနှစ်နှစ်အလလက ပွားလာခဲ့တဲ့ ရန်မီးဟာ ကမ္ဘာပျက်မှပဲ ငြိမ်းတော့တာပဲလို့ ကမ္ဘာပျက်တာကိုတောင် ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်ပြီး ဂုဏ်ယူမိမှာသေချာပါတယ်။
သာသနာနဲ့ ကြုံတုန်းကြုံခိုက် ဗုဒ္ဓဘာသာ တယောက်ဖြစ်ခွင့် ရလိုက်တာကို ဂုဏ်ယူမိတယ်။
နံပါတ် ၉ ကအတိုင်း ဖြစ်ရင် “ကမ္ဘာတည်သရွှေ့ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းသွားပြီဟေ့” လို့ ကျူးရင့်မိမှာ သေချာပါတယ်။
ကိုအောင်သာငယ်ရေ ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်တဲ့သူက ရှိသေးတယ်လို့ သ၀န်မတိုနေနဲ့နော့်။
ဆောရီးပဲ Fact နဲ့ Imagination ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ရေးရတော့ ပို့စ်က သာမန်ထက် နည်းနည်း ရှည်သွားတယ်။
တကယ်ကမ္ဘာပျက်သေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မ tag တော့ဘူး။
ရွင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ ( 31/10/09 က တင်ခဲ့တဲ့ မူရင်းပို့စ်က ဒီမှာ ရှိပါတယ် - Nge Naing)
ဒီပို့စ်ကို ပြန်လည်ဖေါ်ပြဖြစ်လို့ myanmar astromy က ပို့စ်ပိုင်ရှင် ခွန်းနဲ့ ကိုကိုးအိမ် တို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သဗ္ဗေ သတ္တာ အ၀ရာ ဟောန္တု၊ အဗျာပဇ္ဇာ ဟောန္တု၊ အနီဃာ ဟောန္တု၊ သုခိအတ္တာနံ ပရိဟရန္တု။
Posted in: ကျန်းမာရေး/ဇီဝသိပ္ပံ,ဘာသာရေး
June 29, 2011 at 2:42 PM Reply
June 29, 2011 at 7:41 PM Reply
June 29, 2011 at 9:20 PM Reply
မရောက်တာကြာပြီ။။ ဘယ်မှမေ၇ာက်ဘူး။ ငွေမရတဲ့အလုပ်တွေ များနေလို့။
ပို့စ်အဟောင်းပေမဲ့ တခါမှမဖတ်ဖူးဘူး။ ဖတ်သွားတယ်။ ၁၂ အကြောင်းတော့ ပြောကြတယ်။ကြည့်လဲကြည့်ရတယ်။ သိပ်တော့လဲ မတုန်လှုပ်ပါဘူး။ အားလုံးပျက်ကြရမယ်လို့ နားလည်ထားတယ်။ ဖြစ်နဲ့ ပျက်ပဲ မရ ရအောင် မှတ်တော့မယ်။ နောက် မသေခင် တန်ဖိုးရှိတာတွေ လုပ်ချင်သေးတာပဲ။ ဘုန်းကြီးကိုမေးကြည့်လို့ ပြောတာက သိပ္ပံနဲ့ လွဲနေသလားလို့။ ကမ္ဘာတခုပျက်ဖို့ဆိုတာ မိုင်ပေါင်းများစွာနက်တဲ့ တွင်းကြီးထဲကို သဲတွေ ထည့်နေသလိုပဲတဲ့။ ဒီတော့ ကြာအုံးမယ်လို့လည်း ထင်ပါရဲ့။ ဒါက ဗုဒဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အပေါ် ယုံကြည်မှုတခုပေါ့။ ကြားဖူးတယ် သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ မှာ ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ် ဆိုပြီ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့။ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သိပ္ပံအချက်တွေက ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ.. ယုံလို့မရသေးဘူး။
June 30, 2011 at 10:30 AM Reply
ဒီပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ယုံတဲ့သူမယုံတဲ့သူတော့ အမျိုးမျိုးရှိမှာပဲ။ သိပ္ပံအထောက်အထားဆိုတာ Experiment တွေ တွက်ချက်မှုတွေက ထွက်လာတဲ့ အဖြေမို့ ကမ္ဘာပျက်မပျက်ဆိုတာ မသေချာပေမဲ့ Planet Nibiru ဂြိုလ်ကြီး ကမ္ဘာနဲ့နီးကပ်စွာ ဖြတ်သွားဖို့ ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ မယုံဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ၈၅ ခုနှစ်က ၇၇ နှစ်ကြာမှ တပတ်ပြည့်တဲ့ လေလီကြယ်တံခွန်ကြီး ဟာ ကမ္ဘာနားက ဖြတ်သွားလိ့်မယ်လို့ တွက်ထားတဲ့အတိုင်း တကယ်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း ဘယ်နေ့နေကြတ်မယ်၊ လကြတ်မယ်လို့ တွက်ထားတဲ့အတိုင်း တကယ်ကြတ်နေတာ ရှိပါတယ်။ မိုးလေ၀သတွေကလည်း တွက်ချက်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ခန့်မှန်းမှုတွေဖြစ်လို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း အရှိန်ဘယ်လောက်၊ မိုင်ဘယ်လောက် ခန့်မန်းထားတဲ့အတိုင်း အတိအကျ ၁၀၀% မဟုတ်ရင်တောင်မှ တကယ် ဖြစ်လာတာပဲ များပါတယ်။ ဘာမဆို မျက်စိတမှိတ်လျှပ်တပြက်အတွင်းမှာ အချိန်မရွေး တခုခုဖြစ်သွားနိုင်တာကိုတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ရသည်ရှိသော် အချိန်မရွေး လက်ခံနိုင်အောင် အဆင်သင့် ပြင်ထားရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီပို့စ်ကိုတင်ပြီး ၂၄ နာရီ မပြည့်ခင် လာလည်သွားတဲ့ လူတထောင်ကျော်ထဲက ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တကူးတက မှတ်ချက်ပေးသွားတဲ့ Kp3, ငြိမ်းနိုင်နဲ့ စိန်ဗေဒါတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရေမရအဖတ်မရ ပြဿနာ လက်ဆောင်တွေကိုတော့ ပေးသူပေးတာကို အပေးခံရသူ လက်မခံရင် ပေးသူဆီ ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ ပေးသူဆီ ပြန်မရောက်ဘဲ တခြားသူတွေဆီ မတော်တဆ ရောက်မှာစိုးလို့ ရှင်းပစ်လိုက်တာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
June 30, 2011 at 6:27 PM Reply
မငယ်နိုင်က မှတ်ချက်ထဲမှာ "ဟေလီကြယ်တံခွန်" ကို "လေလီကြယ်တံခွန်" ဆိုပြီး မှားရိုက်ထားတယ်။
လေလီကြယ်တံခွန်ကြီး ----- ဟေလီကြယ်တံခွန်ကြီး
အတိအကျ ရေးချင်ရင်တော့ -
"၈၅ ခုနှစ်က ၇၇ နှစ်ကြာမှ တပတ်ပြည့်တဲ့ လေလီကြယ်တံခွန်ကြီး ဟာ ကမ္ဘာနားက ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ တွက်ထားတဲ့အတိုင်း တကယ်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်"
လို့ မငယ်နိုင် ရေးထားတဲ့ စာကြောင်းကို အောက်က စာကြောင်းနဲ့ အစားထိုးပြီး ဒီလို ရေးနိုင်ပါတယ်။
"နေကိုတပတ်ပတ်ချိန် ၇၇ နှစ် ရှိပေမယ့် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းက ဂြိုဟ်တွေရဲ့ ဆွဲအားကြောင့် ပတ်လမ်း နည်းနည်းပြောင်းသွားလို့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃ဝဝ အတွင်းမှာ ၇၅ နှစ် - ၇၆ နှစ်မှာ တကြိမ် ကမ္ဘာကနေ သာမန်မျက်စေ့နဲ့ မြင်နိုင်တဲ့ ဟေလီကြယ်တံခွန်ကြီး ဟာ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ နဲ့ ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ကြားမှာ သာမန်မျက်စေ့နဲ့ မြင်ရမယ်လို့ တွက်ထားတဲ့အတိုင်း တကယ် မြင်ခဲ့ရပါတယ်။"
ဂရမ်မာကြာရွက် -အတိအကျ ရေးပြထားပြီးပြီဆိုတော့ ကျွန်မ ပြန်ရေးဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်မက ဟေလီကြယ်တံခွန်အကြောင်းကို ဂရမ်မာ ကြာရွက်ရေးထားသလောက် မသိဘူး။ ၇၇ နှစ်ကြာမှ တပတ်ပြည့်တဲ့အတွက် ၈၅ ခုနှစ်မှာ တွေ့ရပြီးရင်နောက်ထပ် ၇၇ နှစ်ကြာမှ တခါပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုတာပဲ သင်ခဲ့ဖူးတာကို မှတ်မိနေလို့ ဥပမာအနေနဲ့ ထည့်ရေးလိုက်တာသာ ဖြစ်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
July 1, 2011 at 11:10 AM Reply
မနေ့က ဟေလီကြယ်တံခွန် အကြောင်း ကွန်မန့် ရေးပြီး အချိန်မရလို့ ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက် အမှန်တွေကို မရေးဖြစ်လိုက်ဘူး။
ပို့စ် နဲ့ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက် အမှန်တွေကို ပြောပြပါရစေ။
နောက်နှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာပျက်တော့မလား။
နောက်နှစ် ဒီဇင်ဘာ (၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ) ၂၁ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာပျက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ......... တွေမှာလည်း ကမ္ဘာပျက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခုတော့ Planet Nibiru နဲ့ ပတ်သက်ပြီး myanmar astronomy က တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို ကိုကိုးအိမ်က ပြန်လည်ဖေါ်ပြထားတာကို တွေ့လို့ ဖတ်မိတော့ အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ဒီပို့စ်ကို တင်တဲ့ကာလနဲ့ အခုလက်ရှိ ကာလကြား
ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ Planet Nibiru နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောထားတဲ့အတိုင်း ငလျှင်လှုပ်ခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ ဆူနာမီရေလှိုင်းတွေ ရိုက်ခတ်ခြင်းတွေကို ကမ္ဘာ့ဒေသ အတော်များများမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
Planet Nibiru ကြောင့် ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါ။ တခြားအကြောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်တာပါ။
ဒါတကယ်ပဲ ဖြစ်လာမလား ဖြစ်လာနိုင်မနိုင်ကို ဘယ်သူက ဘယ်လို အတိအကျ ပြောနိုင်မလဲ။
ဒါ တကယ်ပဲ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာကို အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်တွေက အတိအကျ ပြောထားပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်သလဲ ဆိုတော့ Planet Nibiru ဆိုတဲ့ ဂြိုဟ်ဟာ တကယ် မရှိလို့ပါ။
၂၀၁၂ ကူးမည့် အခုလာမည့် New Year က Happy New Year ဖြစ်မလား Uncertain New Year ဖြစ်မလား ဆိုတာ တကယ်ကို တွေးတောဆင်ခြင်ဖို့ လိုနေတာ အမှန်ပဲ။
၂၀၁၂ ကူးမည့် အခုလာမည့် နှစ်သစ်က ခါတိုင်း နှစ်သစ်တွေလိုပါပဲ။ မသေချာ မရေရာတဲ့ နှစ်သစ် ဖြစ်မလားလို့ တွေးတော ဆင်ခြင်စရာ မလိုပါဘူး။
Planet Nibiru ဒါမှမဟုတ် တခြားဂြိုဟ် တခုခု ဒါမှမဟုတ် ဥက္ကာပျံ တခုခုက ကမ္ဘာကို ဝင်တိုက်မယ် ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာနားက ဖြတ်သွားလို့ ကမ္ဘာမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ကျရောက်မယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို အာကာသသိပ္ပံပညာရှင်တွေက သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထား မရှိတဲ့အတွက် ပယ်ချထားပြီးပါပြီ။
အာကာသအကြောင်းကို အင်မတန် အားကောင်းတဲ့ အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်းကြီးတွေနဲ့ လက်တွေ့ မျက်ခြေမပြတ် ထောက်လှမ်းနေတဲ့၊ စာတွေ့ လေ့လာဆွေးနွေး နေတဲ့ အာကာသသိပ္ပံပညာရှင် အများစုက "၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှာ Planet Nibiru ဒါမှမဟုတ် တခြားဂြိုဟ် တခုခု ဒါမှမဟုတ် ဥက္ကာပျံ တခုခုက ကမ္ဘာကို ဝင်တိုက်မယ် ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာနားက ဖြတ်သွားလို့ ကမ္ဘာမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ကျရောက်မယ်" ဆိုတဲ့ အချက်ကို ကြားတောင် မကြားဖူးကြပါဘူး။
မငယ်နိုင်ရေ သိတဲ.လူကပြောတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး နားထောင်ပါ
July 1, 2011 at 12:30 PM Reply
Anonymous (July 1, 2011 11:23 AM) = mg = မောင် = zaw = ဦးသူတော် = မှော်ဆရာ =
စောင်.ကြည်.သူတဦး = စောင်.ကြည်.သူတဦး (ခေတ္တ မက်ဒရစ်) = တုတ်ကြီး = SV ယောကျာ်း
ဆိုတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ရေးတဲ့ ၇ု၇ှက စစ်ဗိုလ်
မင့်မလဲ မငယ်နိုင်ကို ဘာလေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် တိုက်ခိုက်ဖို့၊ နှောင့်ယှက်ဖို့ဘဲ ချောင်းနေတာကိုး
July 1, 2011 at 1:31 PM Reply
((၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှာ Planet Nibiru ဒါမှမဟုတ် တခြားဂြိုဟ် တခုခု ဒါမှမဟုတ် ဥက္ကာပျံ တခုခုက ကမ္ဘာကို ဝင်တိုက်မယ် ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာနားက ဖြတ်သွားလို့ ကမ္ဘာမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ကျရောက်မယ်))
လို့ သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထား မရှိပဲ ရေးထားတာကို ဖြန့်တဲ့လူတွေက ဖြန့်တယ်..
ဘာသာပြန်တဲ့ လူတွေက ပြန်တယ်..
ထပ်ဖြန့်တဲ့ လူတွေက ထပ်ဖြန့်တယ်..
အစ်မငယ်နိုင်က သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထား မရှိပဲ ရေးထားတာကို
သတိမထားမိလို့ ပို့စ်အနေနဲ့ ကူးတင်တယ်..
အဲဒီလို သူ့ဟာနဲ့သူ ပြည့်စုံနေပြီးသား၊ ထောင့်စေ့နေပြီးသား လောကကြီးမှာ
(( မငယ်နိုင်ရေ သိတဲ.လူကပြောတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး နားထောင်ပါ ))
လို့ အစ်မငယ်နိုင်ကို နှောင့်ယှက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်သက်သက်နဲ့ လုံးဝ မလိုအပ်ပဲ အပို ဝင်ပြောတဲ့ ရုရှားက စစ်သား mg ဆိုတဲ့ အကောင်ကတော့ လူပိုသက်သက်ပဲ..
July 1, 2011 at 7:22 PM Reply
Anonymous (July 1, 2011 11:23 AM)
နဲ့ ရေးသွားတဲ့ ရုရှက mg
မငယ်နိုင်က စာဖတ်သူတွေ အတွက် ဗဟုသုတ ရစေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တင်ပြလေ့ရှိတော့ ဒီအကြောင်းကို ကိုကိုးအိမ်က ပြန်လည်ဖေါ်ပြထားတာကို တွေ့လို့ စာဖတ်သူတွေ သိသင့်တယ် ထင်လို့ စေတနာနဲ့ တင်လိုက်တာသာ ဖြစ်တယ်။ သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထား မရှိပဲ ရေးထားတာကို
မငယ်နိုင်က သတိမထားမိလို့ တင်လိုက်တာသာ ဖြစ်တယ်။ သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထား မရှိပဲ ရေးထားတာကို
သတိထားမိတဲ့ ဂရမ်မာကြာရွက် က စာဖတ်သူတွေ အမှတ်မှားမှာ စိုးလို့ ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပီး အချက်အလက် အမှန်တွေကို ရှင်းပြထားပီးပီ။ မငယ်နိုင်ကလဲ သူ သတိမထားမိတာကို ထောက်ပြပေးတာ၊ အချက်အလက် အမှန်တွေကို ပြောပြပေးတာတွေကို ဝမ်းပန်းတသာ လက်ခံပီး ပြန် ဆွေးနွေးမှာဘဲ။ အဲဒါကို မင်းက ဘာမှ ဝင်ရှုပ်မနေနဲ့။
ရုရှက mg .......... "မငယ်နိုင်ရေ သိတဲ.လူကပြောတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး နားထောင်ပါ"
ဆိုပီး နှမ်းဖြူး မနေနဲ့ကွာ။ စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ရောင်းဝယ်ရာမှာ ဆေးရိုးသည် က ကန့်လန့်ကန့်လန့် လုပ်မနေနဲ့ကွာ။
July 1, 2011 at 10:16 PM Reply
မငယ်နိုင်က ကော်ပီလုပ်တင်တယ်၊ ဂရမ်မာကြာရွက်က မှားတာတွေထောက်ပြတယ်၊ Anonymous က နားထောင်ဖို.ပြောတယ်.. မှန်နေတာပဲ
အောက်က တစ်ယောက်တည်း နာမည်သုံးမျိုးနဲ. ဘာတွေဖြစ်နေတာတုန်း
July 1, 2011 at 10:22 PM Reply
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာပျက်/ မပျက် တော့ မသိပါ (အဲ့ဒီအချိန်ကို ရောက်ဖို့လည်း နီးနေပြီမို့ အချိန်တန်ရင် သိရမှာပဲ လို့ စိတ်ထဲထင်မိပါတယ်၊ ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်ရမှာ ဓမ္မတာပဲ မဟုတ်လား )
ဒါပေမဲ့ ကော်မန့်ထဲမှာ အပျက်သဘောဆောင်ပြီး
လာ လာ ရေးသားနေကြတာတွေကတော့ .. မပျက် နိုင်သေးပါလားလို့တွေးမိပြီး စိတ်ပျက်သွားပါတယ် မငယ်နိုင်ရေ..
ငယ်နိုင်.ယောက်ျား = တုတ်ကြီး = mg = မောင် = zaw = ဦးသူတော် = မှော်ဆရာ =
စောင်.ကြည်.သူတဦး = စောင်.ကြည်.သူတဦး (ခေတ္တ မက်ဒရစ်) = တုတ်ကြီး = SV ယောကျာ်း = Anonymous (July 1, 2011 11:23 AM)
July 1, 2011 at 10:25 PM Reply
kiki ပြောတာ အမှန်ပါပဲ မငယ်ရေ.. တကယ်စိတ်ပျက်စရာပါ.. myanmar astronomy ဘက်ဆိုက်ရဲ. လင်.လေး ပေးပါအုံး... အပြည်.အစုံဖတ်ချင်လို.
July 2, 2011 at 12:46 AM Reply
= မောင် (July 1, 2011 10:16 PM)
Anonymous (July 1, 2011 11:23 AM) = mg = မောင် = zaw = ဦးသူတော် = မှော်ဆရာ = စောင်.ကြည်.သူတဦး = စောင်.ကြည်.သူတဦး (ခေတ္တ မက်ဒရစ်) = တုတ်ကြီး = SV ယောကျာ်း
ဆိုတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ရေးတဲ့ ၇ု၇ှက စစ်ဗိုလ်
ဘလော့၇ွာထဲမှာ ၇ွာ၇ိုးကိုးပေါက် ထိုး လမ်းသလားပြီး ခေါင်းမြီးခြုံ အသံဖျက်ပြီး သံသေးသံကြောင်တွေနဲ့ အေ၇မ၇ အဖတ်မ၇ တွေ အော် အော် နေတဲ့ မင်းကို ဘလော့ ၇ပ်မိ၇ပ်ဖတွေက ဆုံးမကြပေမပေါ့
အဲဒီလို မင်းကို ဆုံးမတဲ့ လူတွေ အားလုံးကို မင်း ဘကြီးတယောက်ထဲက ဆုံးမနေတယ်လို့ ထင်မနေနဲ့ လကွာ
ငါက Shin Thant ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ဘဲေ၇းတယ်
ထွေထွေထူးထူးေ၇းစရာ မရှိရင် မေ၇းဘူး
Shin Thant ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုတောင် တခြား Shin Thant တယောက် (July 1, 2011 10:22 PM) က သုံးပြီး ခုနကတင် ဝင်ေ၇းသွားသေးတယ်
အဲဒီ Shin Thant (July 1, 2011 10:22 PM) က ငါ မဟုတ်ဘူး
မင်းကို ဆုံးမတဲ့ တခြားလူတွေကလဲ ငါ မဟုတ်ဘူး
မင်းကို အမြင်မတော်လွန်းလို့သာ ငါက ဆုံးမရတာ
မင်းလို တန်ဖိုးမရှိတဲ့ ၇ု၇ှက စစ်ဗိုလ်ကို ငါက နာမည်အစုံ သုံးပြီး ဆုံးမနေ၇အောင် ငါ့မှာ အချိန်မရှိဘူး
နာမည်အစုံ သုံးပြီး အေ၇မ၇ အဖတ်မ၇ တွေ ရေးပြီး မငယ်နိုင်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် နှောင့်ယှက်နေတဲ့ မင်း အကျင့်ဆိုးနဲ့ နှိုင်းမနေနဲ့
ကမ္ဘာပျက်ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ မပါဘူးတဲ့ says:
July 2, 2011 at 2:43 AM Reply
ကမ္ဘာပျက်ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ မပါဘူးတဲ့
"၂၀၆၁ ခုနှစ် မြန်မာပြည် မြင်ကွင်း" သရော်စာ အပြည့်အစုံကို ဖတ်ရန် "ကမ္ဘာပျက်ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ မပါဘူးတဲ့" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။
July 2, 2011 at 5:23 AM Reply
Shin Thant ဆိုတဲ.ကောင် ရူးနေတာလား
July 2, 2011 at 7:12 AM Reply
Anonymous (July 2, 2011 5:23 AM)
ဘယ့်နှယ် Anonymous ဖြစ်သွားရတာလဲ..
မင်း နာမည် မောင် (mg) နဲ့ မရေးရဲဘူးလား။
July 2, 2011 at 9:10 AM Reply
ဘုန်းကြီးနဲ့လူ တူလာရင်၊ အိမ်နဲ့ကျောင်းနဲ့ တူလာရင်၊ တောဈေးနဲ့ မြို့ဈေးတူလာရင်၊ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ တူလာရင် အဲ့ဒီ တူခြင်းလေးတူ တူလာရင် ကမ္ဘာပျက်မယ် ဆိုတဲ့ရှေးစကားပုံရှိပါတယ်
ဘုန်းကြီးက ဘုန်းကြီးအလုပ်မလုပ်ပဲ လူလိုလုပ်ရင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုမဟုတ်ပဲ အိမ်တွေလို ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ ပြည့်နေရင်၊ တောကဈေးသည်က မြို့ကဈေးသည်တွေလို ဖြစ်လာရင်၊ မိန်းမတွေက ယောက်ျားတွေလုပ်သလို လိုက်ပြီး လုပ်နေကြရင် ကမ္ဘာပျက်ပါမယ်
စာအုပ်တွေပြန်လေ့လာကြပါ..။ ဘုန်းကြီးတွေကို ဘုန်းကြီးအလုပ်ပဲလုပ်ဖို့ကိုပဲ အရင်ဆုံးထိန်းကြပါ..။
July 2, 2011 at 10:37 AM Reply
July 2, 2011 at 10:41 AM Reply
(၂) စစ်ဗိုလ်တွေ နဲ့ စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေ တူလာရင်၊
July 2, 2011 at 10:44 AM Reply
July 2, 2011 at 10:47 AM Reply
July 2, 2011 at 10:53 AM Reply
July 2, 2011 at 11:06 AM Reply
July 2, 2011 at 11:09 AM Reply
July 2, 2011 at 11:35 AM Reply
စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်များ၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ (war crimes) နှင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများ (crimes against humanity) ကို စုံစမ်းရေးကော်မရှင် (CoI) ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးရန် အောက်ပါ နိင်ငံ ၁၆ နိင်ငံက ထောက်ခံထားပြီ ဖြစ်ပါသည်။
(၂) ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း
(၃) ချက် သမ္မတနိုင်င
စုစုပေါင်း ၁၆ နိင်ငံက ထောက်ခံထားပြီ ဖြစ်ပါသည်။
July 2, 2011 at 11:41 AM Reply
(၁) သြစတြေလျ (၂) ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း (၃) ချက် သမ္မတနိင်ငံ (၄) ဆလိုဗက်ကီးယား(၅) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (၆) ကနေဒါ (၇) ဟန်ဂေရီ (၈) နယူးဇီလန် (၉) နယ်သာလန် (၁ဝ) ပြင်သစ် (၁၁) အိုင်ယာလန် (၁၂) လစ်သူယေးနီးယား (၁၃) အက်စတိုးနီးယား (၁၄) ဘယ်လ်ဂျီယံ (၁၅) ဒိန်းမတ် (၁၆) လတ်ဗီးယား
July 2, 2011 at 9:25 PM Reply
ခေတ္တကိုရီးယား ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကလာလိုက်သေးတယ်။ စစ်သားက စစ်သားအလုပ်မလုပ်တာလည်း ထည့်ပြောဦးလေ။ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့အနစ်နာခံဖို့ နေနေသာသာ ပြည်သူကိုစာနာတဲ့စိတ်လေး နည်းနည်းပါးပါး တောင်မထားကြတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ အုပ်ချုပ်နေမှ တော့ တိုင်းပြည်ပျက်မှာပဲ
ကို SLIP လုပ်ထားတဲ.ဘလော.က ကူးလာတာပဲ
July 5, 2011 at 1:24 PM Reply
လို့ မန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးဖွဲ့တော်မူခဲ့တဲ့ လေးဆစ်ကဗျာကို ဒီဘလော့ကို လာလည်တော့မှ လက်တွေ့ကျကျ ပိုနားလည်ရတော့တယ်...
စစ်ခွေးတွေ ဟောင်ပေမယ့် သမိုင်းမှန်ကို ထုတ်ဖော်တဲ့ မှတ်တမ်းတွေ၊ စစ်အုပ်စုရဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ဖွင့်ချတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ၊ ဇာတိမာန် တိုးပွားစေတဲ့ စာညွန့်တွေ၊ ဗဟုသုတ တိုးပွားစေတဲ့ စာတွေကို အရေးအသားကောင်းကောင်းနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲ ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ မငယ်နိုင်ရဲ့ ကောင်းသတင်းတွေက ထွန်းပြောင်ဆဲပါ... စစ်ခွေးတွေ ဟောင်လေလေ၊ မငယ်နိုင်ရဲ့ ကောင်းသတင်းတွေက ပိုထွန်းပြောင်လေလေပါ...
ဒီ ပို့စ်မှာ လာဟောင်ထားသော စစ်ခွေးများ ဖတ်ရန် says:
July 6, 2011 at 2:00 PM Reply
ဒီ ပို့စ်မှာ လာဟောင်ထားသော စစ်ခွေးများ ဖတ်ရန်
Activist & Observer - ဟုတ်ပါတယ် ခွေးတွေက ဟောင်လို့အခုထိ မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ ပြီးဖို့ နေနေသာသာ သခင်အားပေးေ ခွးတွေဆိုတော့ ဟောင်သံက ပိုတောင် ကျယ်လာသေးတယ်။ ဟောင်တာ ဒီမှာလာဟောင်တာတင်မကဘူး သူတို့ဘလော့ဂ်တွေမှာလည်း ကျွန်မ ဓါတ်ပုံတွေ ခိုးတင် ပေါက်ကရတွေ စွပ်စွဲရေးသားပြီး ဟောင်ထားကြတာ အများကြီးပဲ။ အရှိန်ကုန်ရင် သူ့ဖါသာသူ ရပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပဲ သဘောထားတယ်။ ခွေးဟောင်လို့ဆိုပြီး ကျွန်မ လုပ်နေတာတွေ ရပ်သွားမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
- zaw - တကယ်မငြိမ်းချမ်းတာက မင်းတို့ပါ။ ငါကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ကိုယ်သိတဲ့ နည်းနည်းလေးကို ကိုယ့်လောက်မသိသူတွေ ဖတ်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာ ကိုယ့်ထက်သိတဲ့သူတွေ ရေးထားတဲ့ အချက်အလက်အများကြီး လာဖြည့်ပေးတဲ့သူတွေ ရှိတော့ ကိုယ်တိုင်ရော တခြား လာလည်သူတွေပါ မသိသေးတာ မသိခဲ့တာကို ထပ်သိရနဲ့ ဟန်ကိုကျနေတာပဲ။ ငါ့ဘလော့ဂ်က ပို့စ်တွေကို ကြိုက်တဲ့သူဖတ်၊ မကြိုက်တဲ့သူ မဖတ်ဘဲနေနိုင်ပ်လျက်နဲ့ မကြိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ မင်းတို့ကတော့ ငါ့ပို့စ်တွေကို မကြိုက်ဘူးလို့သာ ပြောတယ်၊ ငါ့ဘလော့ဂ်ကို လာတာ အကုသိုလ်များတယ်လို့လည်း ကြိမ်ကြိမ် ပြောဖူးတယ်၊ မလာရလည်း မနေနိုင် မဖတ်ရရင်လည်း မနေနိုင်မထိုင် မနနိုင်နဲ့ မင်းတို့မှ ကယ်ဝဋ်ကြွေးခံနေရတဲ့သူ အစစ်အမှန်အမှန်တွေပါ။ မဖတ်ချင်ဘဲ ဖတ်နေရတဲ့ ၀ဋ်ကြွေး မလာချင်ဘဲ လာနေရတဲ့ဝဋ်ကြွေး မပတ်သက်ချင်ဘဲ ပတ်သက်နေရတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးတွေက အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရုံမှတပါး ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါ။
July 6, 2011 at 2:07 PM Reply
Activist & Observer - ဟုတ်ပါတယ်၊ ခွေးတွေက ဟောင်လို့ အခုထိ မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ ပြီးဖို့ နေနေသာသာ သခင်အားပေး ခွေးတွေ ဆိုတော့ ဟောင်သံက ပိုတောင် ကျယ်လာသေးတယ်။
ဟောင်တာ ဒီမှာ လာဟောင်တာတင် မကဘူး၊ သူတို့ဘလော့ဂ်တွေမှာလည်း ကျွန်မ ဓါတ်ပုံတွေ ခိုးတင်၊ ပေါက်ကရတွေ စွပ်စွဲရေးသားပြီး ဟောင်ထားကြတာ အများကြီးပဲ။
အရှိန်ကုန်ရင် သူ့ဖါသာသူ ရပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပဲ သဘောထားတယ်။ ခွေးဟောင်လို့ ဆိုပြီး ကျွန်မ လုပ်နေတာတွေ ရပ်သွားမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
July 6, 2011 at 2:17 PM Reply
zaw - တကယ် မငြိမ်းချမ်းတာက မင်းတို့ပါ။ ငါကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ ကိုယ်သိတဲ့ နည်းနည်းလေးကို ကိုယ့်လောက်မသိသူတွေ ဖတ်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာ ကိုယ့်ထက်သိတဲ့သူတွေ ရေးထားတဲ့ အချက်အလက် အများကြီး လာဖြည့်ပေးတဲ့သူတွေ ရှိတော့ ကိုယ်တိုင်ရော တခြား လာလည်သူတွေပါ မသိသေးတာ၊ မသိခဲ့တာကို ထပ်သိရနဲ့ ဟန်ကိုကျနေတာပဲ။
ငါ့ဘလော့ဂ်က ပို့စ်တွေကို ကြိုက်တဲ့သူဖတ်၊ မကြိုက်တဲ့သူ မဖတ်ဘဲ နေနိုင်ပါလျက်နဲ့ မကြိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ မင်းတို့ကတော့ ငါ့ပို့စ်တွေကို မကြိုက်ဘူး လို့သာ ပြောတယ်၊ ငါ့ဘလော့ဂ်ကို လာတာ အကုသိုလ်များတယ် လို့လည်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောဖူးတယ်၊ မလာရလည်း မနေနိုင်၊ မဖတ်ရရင်လည်း မနေနိုင်မထိုင်နိုင် နဲ့ မင်းတို့မှ ကံဝဋ်ကြွေး ခံနေရတဲ့သူ အစစ်အမှန်တွေပါ။
မဖတ်ချင်ဘဲ ဖတ်နေရတဲ့ ၀ဋ်ကြွေး၊ မလာချင်ဘဲ လာနေရတဲ့ ၀ဋ်ကြွေး၊ မပတ်သက်ချင်ဘဲ ပတ်သက်နေရတဲ့ ၀ဋ်ကြွေးတွေက အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရုံမှတပါး ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါ။
July 27, 2011 at 4:57 PM Reply
C-Box မှ မှတ်ချက်အချို့
"ကမ္ဘာပျက်မယ့်နောက်ဆုံးနေ့(၂၀၁၂)" မူရင်းဆောင်းပါးရှင် "ခွန်း" ၏ မှတ်ချက် says:
"ကမ္ဘာပျက်မယ့်နောက်ဆုံးနေ့(၂၀၁၂)" မူရင်းဆောင်းပါးရှင် "ခွန်း" ၏ မှတ်ချက်
ဒီပို့စ် ("နောက်နှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာပျက်တော့မလား") ရဲ့ အဓိကအပိုင်း ဖြစ်တဲ့ "ကမ္ဘာပျက်မယ့်နောက်ဆုံးနေ့(၂၀၁၂)" မူရင်းဆောင်းပါးကို ရေးသားသူလဲ ဖြစ်၊ Myanmar Astronomy ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်လဲ ဖြစ်တဲ့ "ခွန်း" က C-Box မှာ လာရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်ပါ။
ခွန်း: ကမ္ဘာတကယ်ပျက်မပျက် ကျနော့်အမြင်ကို [ http://myanmarastronomy.blogspot.com/2008/10/blog-post.html ] မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကူးယူတဲ့သူတွေက အဲဒီ ရှင်းလင်းချက်ကိုပါ ဖော်ပြပေးစေချင်ပါတယ်
"ကမ္ဘာပျက်မယ့်နောက်ဆုံးနေ့(၂၀၁၂)" မူရင်းဆောင်းပါးရှင် "ခွန်း" ကို အကြောင်းပြန်ကြားချက် says:
July 27, 2011 at 7:43 PM Reply
"ကမ္ဘာပျက်မယ့်နောက်ဆုံးနေ့(၂၀၁၂)" မူရင်းဆောင်းပါးရှင် "ခွန်း" ကို အကြောင်းပြန်ကြားချက်
ခွန်း: ကမ္ဘာပျက်မဲ့ကိစ္စကို စဖွတဲ့သူတစ်ယောက်လိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မလုံမလဲလဲ ဖြစ်ရပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတည်းက ကျနော်ရှင်းပြပြီးသားပါ။ ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတဲ့ပို့စ်ကိုပဲ ရွေးကူးကြတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူ
၂ဝ၁၂ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကမ္ဘာကြီး ပျက်သုဉ်းမည် ဆိုသော မာယာပြက္ခဒိန်၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ says:
November 25, 2012 at 5:06 PM Reply
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်
ကမ္ဘာကြီးအား ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ပျက်သုဉ်းမည်ဟု မာယာပြက္ခဒိန်တွင် ရေးသား ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသည့် အချက်ကို ကျွမ်းကျင်သူများက
ကမ္ဘာပျက်မည့်နေ့ကို ကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ်မှုမှာ စာရေးဆရာများနှင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး ထုတ်လုပ် သူများ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်း သာဖြစ်ပြီး မက္ကဆီကို အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ မာယာတို (T)ပုံစံ ကျောက်တုံးတွင် ထွင်းထု ထားသည့် မာယာပြက္ခဒိန်တွင် ကမ္ဘာပျက်မည့် အကြောင်းအရာ လုံးဝမပါရှိကြောင်း သိရသည်။ အကြောင်း ရင်းအမှန်မှာ ၄င်း ကျောက်တုံးပေါ်တွင် မာယာ အုပ်ချုပ်သူတို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် စစ်ပွဲများနှင့် ၄င်းတို့၏ ဘဝအကြောင်းကို ရေးမှတ် ထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် မာယာပြက္ခဒိန်၏ နောက်ဆုံး နေ့ရက် အမှန်မှာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်ဖြစ်ပြီး ၄င်းနေ့ ရက်မှာ မာယာ ပြက္ခဒိန်ရာသီ စက်ဝန်း တစ်ပတ် ကုန်ဆုံးသည့် နေ့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လူကြိုက်များ ထင်ရှားသည့် ''၂ဝ၁၂'' ကမ္ဘာပျက်သည့် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ကဲ့သို့ ရေကြီးမှု၊ ငလျင်လှုပ်မှုများနှင့် မီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုတို့ကြောင့် ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီး ရမည့်အခြေအနေမျိုး မာယာလူမျိုးတို့ ကြိုတင် ဟောကိန်း ထုတ်ထားခြင်း မရှိပေ။
မာယာတို့တွင် အချိန် ထပ်ခါ ထပ်ခါဖြစ်နေသော အတွေးအခေါ် မှန်းဆချက် တစ်ရပ်ရှိနေပြီး ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးသွားမည်ဟု ယူဆထားမှု မရှိကြောင်း မက္ကဆီကို ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင် ဂျို့စ်ရိုမီယိုက ပြောကြားသည်။
EI Tortuguero ရှိ Monument6ဟုခေါ်သော မာယာ ရှေးဟောင်းကျောက် တုံးသည် အပိုင်းအဆ ၆ ခု ကွဲနေပြီး ၄င်းကျောက်တုံးကို ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၄င်းကျောက်တုံး အစိတ်အပိုင်းများကို အမေရိကန်နှင့် မက္ကဆီကိုရှိ ပြတိုက်များတွင် ပြသထားသည်။
၄င်းမာယာတို့၏ ကျောက်တုံးကို ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်သုတေသီ တစ်ဦးက ပထမဦးဆုံးလေ့လာပြီး တွေ့ရှိချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင်များက ထပ်မံစူးစမ်းလေ့လာရာမှ မာယာ တို့၏ ပြက္ခဒိန်ရာသီ ကုန်ဆုံးရက်သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်တုံးတွင် ထွင်းထုထားသည့် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့သည် ကမ္ဘာကြီး ပျက်သုဉ်းမည့် ကြိုတင်ဟောကိန်း တစ်ခုမဟုတ်ဘဲ ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်မှာ မာယာတို့၏ အုပ်ချုပ်သူ Bahlam Ajaw ၏ သမိုင်းကြောင်း သာဖြစ်သည်ဟု ရိုမီယိုက ပြောကြားသည်။ နောက်ဆုံး နေ့ရက်မှာ ခရစ် မပေါ်မီ ဘီစီ ၃၁၁၄ က စတင်ခဲ့သည့် ကာလရှည်ကြာသော မာယာပြက္ခဒိန် ကုန်ဆုံးရက်ကို ရည်ညွှန်းပြီး စုစုပေါင်း ရက်ပေါင်း ၁၄၄ဝဝဝ နှင့် ညီမျှသော အချိန်ယူနစ် တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ကာလရှည်ကြာစွာ အသုံးပြုရသော မာယာ ပြက္ခဒိန်မှာလည်း အဆုံးမရှိသည် ကို တွေ့ရပြီး ပြက္ခဒိန်ရာသီ ကုန်ဆုံးပါက နောက်ထပ် ပြက္ခဒိန်ရာသီ အသစ်ပြန်စ နိုင်ကြောင်းဖြင့် မက္ကဆီကို သမိုင်းပညာရှင် ဗဲလ်လက်စ်ကွဇ်က ပြောကြားသည်။
မာယာတို့သည် စိတ်ကူးဖြင့် ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်ကြပြီး ၄င်းတို့သည် နေ့အလိုက် မိုးရွာမှု၊ မိုးခေါင်မှု၊ ဆန်စပါး ရိတ်သိမ်းမှု အခြေအနေတို့နှင့် ဆက်စပ်ပြီး အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပျက်လာနိုင်မည့် အကြောင်းအရာတို့ကို ခန့်မှန်း ဟောကိန်း ထုတ်ကြကြောင်း သိရသည်။ မာယာ ပြက္ခဒိန်တွင် ကမ္ဘာပျက်မည့် နေ့ကို ကြိုတင် ဟောကိန်း ထုတ်ထားသည် ဆိုသည်မှာ ဂျူဒီယိုခရစ်ယာန်၏ ဘာသာပြန်ဆိုချက် သာဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောကြား ကြသည်။ ။
(Credit - Myawady)
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ဝ ရက် - ကမ္ဘာမပျက်မီ နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်မည်လား (၁) says:
December 20, 2012 at 1:44 PM Reply
၂၀-၁၂-၂၀၁၂ - ကမ္ဘာပျက်မည်ဆိုသည့် မာယာ ပြက္ခဒိန် နောက်ဆုံးနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် မတိုင်မီ ၁ ရက်အလို
ကိုယ်တိုင် မကြုံလို၊ မတွေ့လိုသော်လည်း လူ့ဘောင်လောက ပျက်စီးနိုင်သည် ဟူသော သတင်းများသည် လူအများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံရပြီး လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ပျံ့နှံ့လေ့ရှိကြသည်။ ဥပမာ - "၂ဝဝဝ ခုနှစ် ရောက်လျှင် ကမ္ဘာတွင် ဧရာမဘေးကြီး ကျရောက်လိမ့်မည်" ဟု လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ နှစ်ကျော်က ပေါ်ခဲ့သည့် "ဝိုင်တူးကေ Y2K ကောလာဟလ" သည် ပညာတတ် အချို့ကြား၌ပင် စိုးရိမ်စိတ်များ ဖြစ်ခဲ့သည်အထိ ‘အောင်မြင်’ခဲ့သည်။ ဝိုင်တူးကေနှင့် အလားတူ "၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် ကမ္ဘာပျက်ကိန်း ရှိသည်" ဆိုသည့်သတင်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ် အနည်းငယ်မှစ၍ ပေါ်လာကာ ဟုတ်များ ဟုတ်လေမလားဟု အထင်ရောက် စိတ်ဝင်စားသူအများ ရှိသည်။ ယင်းကမ္ဘာပျက်ကိန်း ဆိုသည်ကို အခြေခံသော ရုပ်ရှင်များ၊ စာအုပ်များကို ဖန်တီးသူများသည်လည်း ဝင်ငွေကောင်းကြသည်။
၂ဝ၁၂ ကမ္ဘာပျက်ကိန်း ကောလာဟလကို ထုတ်လွှင့်သူများသည် လက်တင်အမေရိကနှင့် တောင်အမေရိကတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃ဝဝဝ ခန့်မှစ၍ ထွန်းကား စည်ပင်ခဲ့သော မာယာလူမျိုးတို့၏ အမွေအနှစ် တစ်ခုကို အသုံးချခဲ့ကြသည်။ အမေရိကတိုက်၏ လူ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးများအနက် အဆင့်အမြင့်ဆုံး လူ့အဖွဲ့စည်းကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြသော မာယာလူမျိုးတို့သည် သင်္ချာ၊ နက္ခတ္တဗေဒ စသည့် အဆင့်မြင့်ပညာအချို့ကို နားလည် တတ်ကျွမ်းခဲ့ကြသည်။ မာယာတို့သည် ပြက္ခဒိန်အမျိုးမျိုးကို ရေးဆွဲ အသုံးပြုခဲ့ရာ တစ်မျိုးသော ပြက္ခဒိန်တွင် ယင်းခေတ် ကာလဝန်းကျင်မျှကို သာမဟုတ်၊ အနာဂတ်နှစ်ပေါင်း ထောင်ဂဏန်း အထိ ကြိုတင် တွက်ချက် ရေးဆွဲထားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပျက်ကိန်းကောလာဟလကို ဖန်တီးသူတို့က ဆိုသည်မှာ မာယာတို့၏ ယင်းပြက္ခဒိန်သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် အဆုံးသတ်သွားသည်။ ထိုသို့ အဆုံးသတ်ခြင်းသည် မာယာတို့က ယင်းနေ့တွင် ကမ္ဘာပျက်မည်ကို ကြိုတင် တွက်ချက်သိရှိခဲ့သဖြင့် ဆက်လက် ရေးထိုးခြင်း မပြုခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သတင်းလွှင့်ခဲ့သည်။ မာယာသမိုင်း သုတေသီတို့က ယင်းအချက် မမှန်ကြောင်း ခေတ်သုံးပြက္ခဒိန်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်တွင် ကုန်ဆုံးသကဲ့သို့ မာယာ ပြက္ခဒိန်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် နှစ်ကုန်၍ အဆုံးသတ်သွားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကောလာဟလဖန်တီးရှင်တို့သည် မီဒီယာများကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးချနိုင်သဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကြောက်စရာကိုမှ ပို၍အာရုံပြုတတ်သည့် လူ့သဘာဝကြောင့်လည်းကောင်း ယင်း ကောလာဟလသည် တောမီးပမာ လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ မည်မျှ ပျံ့နှံ့သနည်း ဆိုပါလျှင် ပညာတတ်အချို့သည်ပင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် ကမ္ဘာပျက်နိုင်သည့်နည်းများကို ဆွေးနွေး ပြောဆိုလာကြသည်အထိ ဖြစ်သည်။ သူတို့ ဆွေးနွေးချက်များမှာ သိပ္ပံပညာရှင်တို့ အခိုင်အမာ တွေ့ရှိထားသည်များနှင့် ဆန့်ကျင်လျက် ရှိသည်။
ကမ္ဘာနှင့် ဝင်တိုက်နိုင်သော အရာများကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင် ထောက်လှမ်းနေသည့် အမေရိကန် အာကာသ အဖွဲ့အစည်း (နာဆာ) က "ကမ္ဘာကို ဧရာမ အပျက်အစီးများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်လောက်အောင် ဝင်တိုက်နိုင်သည့် ဂြိုဟ်၊ ဂြိုဟ်သိမ်၊ ဂြိုဟ်ပဲ့များ လောလောဆယ် မရှိသေးပါ" ဟု ပြောနေသည့်ကြားမှ နီဘီရူး (Nibiru) ဟု အမည်ပေးထားသော ဂြိုဟ်ကြီးတစ်လုံးက ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကမ္ဘာနှင့် ဝင်တိုက်နိုင်သည့်အကြောင်း သတင်းလွှင့်သူက လွှင့်သည်၊ ယုံသူက ယုံသည်။ နေမှ မီးလျှံများ ထွက်ခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်စဉ် တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ယင်းမီးလျှံ အများစုကို ကြိုတင်ခန့် မှန်းနိုင်သည့် နည်းပညာလည်း အဆင်သင့် ရှိသည်။ သို့စဉ်လျက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် နေမှ ဧရာမမီးလျှံကြီးတစ်ခု ထွက်လာကာ ကမ္ဘာကို ဖုံးအုပ် လောင်မြိုက်စေနိုင်သည်ဟု အချို့က အခြေအမြစ်မရှိဘဲ ပြောကြသည်။ လက်ခံသူက လက်ခံကာ တွေးကြောက်ကြသည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ဝ ရက် - ကမ္ဘာမပျက်မီ နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်မည်လား (၂) says:
ကမ္ဘာ့သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းသည် နှစ်ပေါင်းသန်း ၂ဝ အတွင်း ၅ဝ ဒီဂရီမျှပြောင်းခဲ့သည်။ နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း ၁ သန်းအတွင်း ဖြည်းညင်းစွာသာ ပြောင်းသည်ဟု ပညာရှင်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ သို့စဉ်လျက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းများ ရုတ်ခြည်း နေရာပြောင်းရွှေ့ကာ ရှိရှိသမျှ အရာ များ ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ကုန်မည့် အရေးကို စိုးရိမ်နေသူများလည်း ရှိသည်။ ကမ္ဘာသည် ဂလက်ဆီခေါ် ကြယ်စု၏’ပြင်ညီ’ကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် အတွင်းတွင် ဖြတ်ပြီး ယင်းပြင်ညီ ရှိကြယ်များ၊ ဂြိုဟ်များနှင့် တိုက်မိကာ ကမ္ဘာပျက်မည်ဟု အချို့က ဆိုကြသည်။ နက္ခတ္တပညာရှင်များ၏ လေ့လာ တွက်ချက်မှုများအရ ကမ္ဘာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂ သန်းခန့်က ယင်းပြင်ညီကို ဖြတ်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း ၁၄ သန်းကြာမျှ ပြင်ညီနှင့်ဝေးရာ အပေါ်ပိုင်းသို့ ဆက်၍ တက်နေဦးမည်သာဖြစ်ကြောင်း တိုင်းတာ သိရှိ ပြီးဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ် သိပ္ပံပညာရှင်တို့ တွေ့ရှိထားသည်ကို လက်မခံဘဲ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် ကမ္ဘာပျက်မည်ဟု မာယာတို့က ကြိုသိခဲ့သည်ဟု ဆိုနေသူများသည် မာယာတို့နှင့် ခေတ်သစ်လူသားများ အကြား ရှိနေသည့် အဓိက ကွာဟချက်တစ်ခုကို သတိမမူမိသူများ ဖြစ်ကြသည်။
မာယာတို့ တီထွင်အသုံးပြုခဲ့သော ကိရိယာများသည် သူ့ခေတ် သူ့အခါက ‘အဆင့်မြင့်’ တန်းဝင်သော်လည်း ယခုခေတ်အနေနှင့်မူ အကြမ်းစားမျှသာ ဖြစ်ကြသည်။ အလွန် ဝေးလံလှသောနေရာမှ ဂြိုဟ်များ၊ ကြယ်များကို လှမ်းကြည့် လေ့လာနိုင်သော တယ်လီစကုပ် စသည့် ကိရိယာများကို မာယာတို့ မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ချေ။ လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်သော တယ်လီစကုပ်များသည် မာယာယဉ်ကျေးမှု ပျက်သုဉ်းပြီး နှစ်ပေါင်း ၇ဝဝ ကျော် အကြာမှ ပေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်လူသားတို့သည်မူ အလင်းရောင်သုံး တယ်လီစကုပ် များသာမက အိပ်စရေးရောင်ခြည်၊ ဂမ်မာရောင်ခြည် စသည်တို့အပြင် ဒြပ်ဆွဲအားကို အသုံးပြုလေ့လာ နိုင်သော တယ်လီစကုပ်များကိုပင် ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ တယ်လီစကုပ် အချို့ကို အာကာသထဲသို့ ပို့ လွှတ်ထားရှိခြင်းဖြင့် မြေပြင်ပေါ်မှ လေ့လာသည်ထက် ပိုမိုပြတ်သားသော မြင်ကွင်းများကို ရရှိကာ နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်များကို ဖော်ထုတ်နေကြသည်။
အာကာသတွင်းမှ အန္တရာယ်များကို အထက်ပါ ခေတ်မီကိရိယာများဖြင့်သာလျှင် ကြိုတင်သိရှိနိုင်သည်။ ယင်းကိရိယာများသာ မရှိလျှင် ခေတ်သစ်ပညာရှင်တို့သည်လည်း အာကာသအန္တရာယ်များ ပေါ်လာနိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို ကြိုပြောနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ မာယာတို့သည် ခေတ်သစ်လူသားတို့ထက် ဥာဏ်ရည် သာလွန်သည် ထားဦး၊ အဆိုပါ ကိရိယာများ မရှိသဖြင့် ခိုင်မာတိကျသော နက္ခတ္တတွေ့ရှိချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ မာယာတို့ကို ခုတုံးလုပ်၍ လွှင့်ထုတ်သော "ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ကောလာဟလ" သည် အခြေအမြစ် ကင်းမဲ့လွန်းသဖြင့် အထင်ကရ သိပ္ပံပညာရှင်အများအပြားက ယင်းတို့ကို အရေးတယူ ဖြေရှင်းခြင်းပင် မပြုကြချေ။ ဤသည်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ လုပ်စား လှန့်စားနေသူများ ရှိဆဲပင် ဖြစ်သည်။
ယင်းတို့ထဲတွင် တောင်အမေရိကတိုက်၊ ဂွာတီမာလာနိုင်ငံ၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ကပါ ပါဝင် ပတ်သက်လာသောအခါ ယင်းနိုင်ငံတွင် ယနေ့အထိ ရှင်သန်နေဆဲ မာယာ အဆက်အနွယ်တို့က ကန့်ကွက်စာများ ထုတ်ပြန်ရသည်အထိ ဖြစ်လာသည်။ ဂွာတီမာလာအစိုးရနှင့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီတို့သည် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် "ကမ္ဘာပျက် အခမ်းအနား" လုပ်မည်ဆိုကာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို ဆွဲဆောင်စည်းရုံးလျက်ရှိရာ ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် မာယာလူမျိုးတို့ကို သိက္ခာချမည့် လုပ်ပွဲတစ်ရပ်သာ ဖြစ်ကြောင်း ‘မာယာမဟာမိတ်များအဖွဲ့’ Oxlajuj Ajpop က ကြေညာသည်ဟု ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ အေအက်ဖ်ပီသတင်း၌ ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် ဖိလစ်ဂိုမက်ဇ်က ”ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေးအမွေအနှစ် အမှန်တရားတွေကို စီးပွားရေးသမားတွေက သူတို့ရဲ့ အကျိုးအမြတ်အတွက် တစ်နည်းတစ်ဖုံ လှည့်ဖြား အသုံးချနေကြတာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆို ကန့်ကွက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မည်သို့မျှ အခြေအမြစ် မရှိသော "ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ကမ္ဘာပျက် ဟောကိန်း" သည် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်မှစ၍ ပျောက်ကွယ်တော့မည် ဖြစ်သော်လည်း ရှိသင့်သော သိပ္ပံဗဟုသုတနှင့် မှန်ကန်စွာ အကျိုးအကြောင်း ဆင်ခြင်နိုင်မှုများ ကျယ်ပြန့်စွာ မရှိသေးသရွေ့ "ဒီဇင်ဘာ ၂၁ များ"၊ "ဝိုင်တူးကေ" များ ထပ်၍ ပေါ်လာဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။
(၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် နီးလာပြီ
- ကျော်ဦး၊ Popular Myanmar)
"၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် ကမ္ဘာပျက်ကိန်း" ကောလာဟလကြောင့် မီချီဂန်ပြည်နယ်တွင် ကျောင်းများ ရက်ကြိုပိတ် says:
January 5, 2013 at 7:07 PM Reply
"ရှေးခေတ် မာယာလူမျိုးတို့၏ ပြက္ခဒိန်အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးသွားမည်" ဟူသော ကောလဟလများမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မီချီဂန်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ခရိုင်အများအပြားတွင် ပြန့်နှံ့နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ကမ္ဘာပျက်မည့်နေ့ ကောလာဟလများကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မီချီဂန်ပြည်နယ်ရှိ ကျောင်း ၃၃ ကျောင်းကို ပြည်နယ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက ပုံမှန်ကျောင်းပိတ်အားလပ်ရက်များထက် ၂ ရက်စော၍ ပိတ်လိုက်ကြောင်း NBC News တွင် ဖော်ပြသည်။
ထို့အပြင် မကြာသေးမီက နယူးတောင်း မူလတန်ကျောင်း ပစ်ခတ်မှုအတွင်း ကလေးငယ် ၂၀ ဦးအထိ သေဆုံးခဲ့ရသည့် ဖြစ်ရပ်ကြောင့်လည်း "၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် ကမ္ဘာပျက်ကိန်း" အပေါ် မိဘနှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ပိုမို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း မီချီဂန်ပြည်နယ် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ကမ္ဘာပျက်မယ့်နေ့ နဲ့ မာယာပြက္ခဒိန် (၁) says:
သင်္ချာနဲ့ နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရပ်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅,၀၀၀ ကျော် သမိုင်းဦးခေတ် ကတည်းက ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် လေ့လာနိုင်ခဲ့တဲ့ လူမျိုး တမျိုး ရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ အမေရိကတိုက် အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ တွေ့ရတဲ့ မာယာလူမျိုးတွေပါ။ အလယ်ပိုင်း အမေရိကတိုက်မှာ ရှိတဲ့ မက်ဆီကို၊ ဂွာတီမာလာ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်လို နိုင်ငံတလွှားမှာတွေ့ရတဲ့ မာယာတွေ ရဲ့ ရှေးဟောင်း လက်ရာတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့စာပေတွေကနေ မာယာယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားခဲ့တဲ့ခေတ်ကို အံ့မခန်း တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။
ဒီအထဲမှာ သူတို့ရဲ့ပြက္ခဒိန်က ခရစ်တော်မပေါ်ခင် နှစ်ပေါင်း ၃၁၁၄ နှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက် မှာ စခဲ့တာမို့ သုတေသန ပညာရှင်တွေကို အံ့သြစေခဲ့သလို ခရစ်နှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ အထိပဲ ရေတွက်ထားတဲ့ ဒီပြက္ခဒိန်က အံ့သြစရာ အပြည့်ပေးနိုင်တဲ့ ဒီလူမျိုးတွေ ကမ္ဘာကြီး ပျက်သုဉ်းမယ့်နေ့ကိုများ ကြိုပြောခဲ့လေသလားလို့ တွေးခဲ့ကြတာပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Illinois ပြည်နယ်၊ Spoon River ကျောင်းက နက္ခတ္တဗေဒဌာန ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ၀င်းသာထွေးကတော့ ဒါကို လက်မခံပါဘူး။
ဒေါက်တာ ၀င်းသာထွေး - “၂၀၀၅ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက စပြီးတော့ သူတို့ ပြောနေကြတာပါ။ ဒါကတော့ fiction တွေ၊ စိတ်ကူးယဉ်တာတွေပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီး ပျက်မယ် ဆိုပြီး ပြောနေကြတာ။
ဒါက မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ဆို မာယာတွေက ဒီနေ့ကို ပျက်မယ်လို့ အတိအကျ ပြောမသွားပါဘူး။ သူတို့တွေ တွက်ထား၊ လုပ်ထားတဲ့ Calendar က ဒီဖင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ဆုံးတာကိုး။ ဆုံးတာနဲ့ ကျန်တဲ့လူတွေက ဒီနေ့မှာပဲ ကမ္ဘာပျက်မယ့် ပုံစံပြောတာ။ အမှန်က မဟုတ်ပါဘူး။”
ကမ္ဘာပျက်မယ့်နေ့ နဲ့ မာယာပြက္ခဒိန် (၂) says:
January 5, 2013 at 7:10 PM Reply
VOA - မာယာတွေ တင်မကဘဲ တခြားသူတွေကပါ ပြောသေးတယ် မဟုတ်လားဆရာ၊ အဲဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီး ပျက်မယ်လို့။
ဒေါက်တာ ၀င်းသာထွေး - “Nostradamus ကလည်းပြောတယ်။ တရုတ်ပြည်က ချင်းရယ်ချောင်း ဆိုတာကလည်း သူတို့ တွက်ချက်တာတွေကလည်း ၂၀၁၂ခုနှစ် မှာ ကမ္ဘာကြီး ပျက်မယ်ပေါ့။ အဲဒီလို ပြောကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက ဘာအထောက်အထားမှ မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာပျက်ဖို့ အထောက်အထား မရှိပါဘူး။”
VOA - ဒီလိုပြောရတဲ့ အကြောင်းရင်းတော့ ရှိမယ်ထင်တယ် ဆရာ။ အဲဒါ ဂြိုဟ် နက္ခတ်တွေနဲ့များ ဆိုင်သလား။ ပြောပြပေးပါ ဆရာ။
ဒေါက်တာ ၀င်းသာထွေး - “ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ ဂြိုဟ်၊ နက္ခတ်က ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ကို ကြည့်လိုက်လို့ ရှိရင် ကောင်းကင်မှာ တောရပ်စ် လို့ခေါ်တဲ့ နက္ခတ်မှာ ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် အဲဒီမှာ ဂျူပီတာ ဆိုတဲ့ ကြာသပတေး ဂြိုဟ်ကြီး ရှိနေတယ်။ တခြား ဂြိုဟ်တွေက နေ့လည်ဘက်မှာ ဆိုရင်တော့ တခြားဂြိုဟ်ဆို စနေဂြိုဟ်ရယ်၊ သောကြာဂြိုဟ်ရယ်၊ နောက် မာကျူရီ လို့ခေါ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ်ရယ်၊ ဒါတွေပဲ ရှိနေတယ်။ ကျန်တဲ့ ဂြိုဟ်တွေ တတန်းထဲဖြစ်နေတာ (Line up) ဖြစ်နေတာတော့ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် တတန်းတည်း ဖြစ်နေတာမျိုးတော့ ရှိခဲ့ဖူးတာပေါ့လေ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တုန်းက တခါ lineup ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၇၂ ခုက တခါ ဂြိုဟ်တွေ တတန်းတည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ၁၉၈၂ ခု နောက်ပြီးတော့ ၂၀၀၀ ။ အဲဒီအခါတွေတုန်းကလည်း ကျနော်တို့မှာ ဘာမှ ပြဿနာ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။
တခုပဲရှိတာက- လူတွေက ဘယ်လို ထင်သလဲ ဆိုတော့ ဂြိုဟ်တွေ၊ နေတွေ၊ လတွေ တတန်းတည်း တန်းနေမယ်။ ပြီးတော့ နေနဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ ဂြိုဟ်တွေနဲ့ နောက်ပြီး- စင်္ကြာဝဠာ- ကျနော်တို့ရဲ့ နဂါးငွေ့တန်း ကြီးနဲ့က တတန်းတည်း ဖြစ်နေမယ်၊ အဲဒီအခါကျလို့ ရှိရင် ကျနော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာဆွဲအားတွေက များလာပြီးတော့ ကမ္ဘာပဲပျက်မယ် ဆိုပြီးတော့ ပြောကြတာ။ ၂၁ ရက် ဒါမှမဟုတ် ၂၂ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ဆိုရင် ကျနော်တို့ နေက ဒက္ခိဏ ယဉ်စွန်းတန်းလို့ခေါ်တဲ့ တောင်ဘက် အစွန်ဆုံးကို ရောက်တာကိုး။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Winter Solstice လို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒါကတော့ နေက နှစ်စဉ် တန်းနေကျပဲ။ အဲတော့ ဒီနှစ်မှ ပိုပြီး ထူးခြားပြီးတော့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။”
VOA - ဂြိုဟ်တွေ ဒီလို တတန်းထဲ ဖြစ်သွားလို့ ဆွဲအား ပြောင်းသွားမယ်ဆိုတာ တခုတည်းပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တော့ပဲ ပြောတာလား ဆရာ၊ တချို့ကတော့ ဒီနေ့မှာပဲ ကမ္ဘာကြီးက အမှောင် ကျသွားမယ်လို့ပါ ပြောနေတာကရော။
ဒေါက်တာ ၀င်းသာထွေး - “အမှောင်ကျသွားဖို့ကလည်း ကျနော်တို့ ရဲ့နေက အခု သက်တမ်းကပဲ နှစ်သန်းပေါင်း ၄,၅၀၀ ရှိနေပြီ နောက်ထပ် နှစ်သန်းပေါင်း ငါးထောင်လောက် သွားအုံးမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်လို့ တနေ့ ကျရင်တော့ ကျနော်တို့ နေကြီးက ကြီးမားတဲ့ အနီရောင်နေကြီး အကြီးကြီး ဖြစ်လာပြီးတော့ တချို့က ပေါက်ကွဲမယ်လို့လည်း ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မပေါက်ကွဲပါဘူး။ တဖြည်းဖြည်းကြီး လာပြီးတော့ energy တွေ စွမ်းအင်တွေ ကုန်ဆုံးသွားပြီး ပြန်ကျုံ့သွားပြီး white dwarf ပြန်ဖြစ်သွားအုံးမှာပဲ။ အဖြူရောင် နေမှိန်ကလေး တခု ပြန်ဖြစ်သွားအုံးမှာပဲ။”
ကမ္ဘာပျက်မယ့်နေ့ နဲ့ မာယာပြက္ခဒိန် (၃) says:
January 5, 2013 at 7:13 PM Reply
VOA - နောက် မမြင်ရတဲ့ ဂြိုဟ်တခုက လာပြီးတိုက်မှာမို့ ကမ္ဘာပျက်မှာ လို့လည်း ပြောနေတာရှိပါတယ် ဆရာ။
ဒေါက်တာ ၀င်းသာထွေး - “ဒါက စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ပြောနေကြတာပေါ့လေ။ fiction ထဲမှာပါတဲ့ "Nibiru" ဆိုတဲ့ X planet လို့လည်း ခေါ်တယ်။ ဒါဟာ ဆယ်ခုမြောက် ဂြိုဟ်လို့လည်း တချို့ပြောတယ်။ တချို့ကျတော့ ၁၂ ခုမြောက် ဂြိုဟ် လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါကြီးက တခြား ဂြိုဟ်တွေရဲ့ ပတ်လမ်းထဲမှာ မရှိဘဲ ကမ္ဘာရဲ့တောင်ဘက် အောက်ဖက်ကို ကြည့်မှ မြင်ရတယ်ပေါ့လေ။ အဲဒီဂြိုဟ်က မကြာခင်မှာပဲ နေနားကို ကပ်လာပြီးတော့ ကမ္ဘာကို တိုက်မယ်ပေါ့။ အဲဒါမျိုးတွေ ပြောကြတာပေါ့လေ။
အမှန်ကတော့ အဲဒီ "Nibiru" ဆိုတဲ့ X planet ဂြိုဟ်လည်း မရှိပါဘူး။ နောက်တခုက ကျနော်တို့ အလွန်ဆုံးပြောရရင် တွေ့တာက Eris (အဲရစ်) ဆိုတဲ့ ဂြိုဟ်မွှားလေးတခုပဲ ရှိတယ်။ အဲဒါလေးကလည်း အင်္ဂါဂြိုဟ် နဲ့ ကြာသပတေးဂြိုဟ် ကြားမှာရှိတဲ့ ဥက္ကာပျံ ခါးပတ်ကြီးထဲမှာရှိတာ။ အဲဒါကလည်း ကမ္ဘာဘက်ကို ဦးတည်မနေပါဘူး။”
VOA - ..ဆိုတော့ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာကြီး ပျက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းကြတာက သူတို့ အခြေခံပြီး ပြောတဲ့အကြောင်းက ဘာလို့ ထင်ပါလဲ ဆရာ။
ဒေါက်တာ ၀င်းသာထွေး - “ကျနော်တို့ သိပံ္ပပညာရှင်တွေဘက်ကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ ဘာကြောင့် ပြောတယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် တခုပဲရှိတာက- အခုန ပြောသလိုပဲ မာယာ Calendar က ၂၁ ရက်နေ့ မှာ သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့၊ သူတို့ဆွဲထားတဲ့ Calendar ကြီးက ဆုံးတာကိုး။ အဲဒီဆုံးတာကိုပဲ လူတွေက ကမ္ဘာပဲ ဆုံးမယ့်ပုံ၊ ကမ္ဘာပဲ ပျက်တော့မယ့် ပုံစံ မျိုး ပြောကြတာ။ သူတို့တွေ ဆွဲခဲ့တဲ့ Calendar က ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း ရှိတယ် မဟုတ်လား။ နှစ်တထောင် Calendar ပြက္ခဒိန် ရှိတယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီ နှစ်တထောင် ပြက္ခဒိန် Calendar ဆုံးသွားပေမယ့် ကမ္ဘာဆုံးသွားမယ်လို့ ပြောတာမှ မဟုတ်တာ။”
VOA - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Illinois ပြည်နယ်၊ Spoon River ကျောင်းက နက္ခတ္တဗေဒဌာန ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ၀င်းသာထွေး ရှင်းပြသွားတာပါ။
ကမ္ဘာပျက်မယ့်နေ့ နဲ့ မာယာပြက္ခဒိန် (၄) says:
January 5, 2013 at 7:14 PM Reply
မာယာတွေဟာ ပြက္ခဒိန် ၃ မျိုးကို ရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့ Virginia ပြည်နယ် Longwood တက္ကသိုလ်က ရှေးဟောင်း မာယာလူမျိုးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Walter Witschey က ပြောပါတယ်။
(1) Tzolkin လို့ ခေါ်တဲ့ ဘာသာရေး အခန်းအနားတွေအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ ရက်ပေါင်း ၂၆၀ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပြက္ခဒိန်၊
(2) နောက် လက်ရှိ ကမ္ဘာသုံးပြက္ခဒိန်လို ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက် ပါပေမယ့် ၄ နှစ်တကြိမ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ တရက် တိုးတာမျိုး ရက်ထပ်ရက် မရှိတဲ့ Haab လို့ ခေါ်တဲ့ ပြက္ခဒိန်အပြင်
(3) နှစ်ပေါင်းများစွာကို ရေတွက်ထားတဲ့ ပြက္ခဒိန် အရှည်ကြီးပါ။ ဒီပြက္ခဒိန်အရှည်ကြီးမှာ နှစ်ပေါင်း ၅,၁၂၆ နှစ်ပါပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ဆုံးပါတယ်။
မာယာတွေဟာ ရက်ပေါင်း ၂၀ အတွက် သူတို့ရဲ့ ရုပ်ပုံစာနဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ သတ်မှတ် ထားပြီး ၂၀ ပြည့်ရင် အစက်တစက်နဲ့ခြားပြီး အဲဒီ ၂၀ ကို တစ်ခုအဖြစ် ပြန်ရေတွက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကန့်ထားတဲ့ အစက်ပေါင်း ၄ စက် ရှိပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မှာတော့ ရေတွက်ထားတဲ့ ရက်ပေါင်း ၁၃.၀.၀.၀.၀ ရှိနေပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ ဆိုရင်တော့ ၁၃.၀.၀.၀.၁ အဖြစ် ရေတွက်ဖို့ ရှိပြီး အဲဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ်လို့ ရေးထားတာကိုတော့ မတွေ့ရသေးဘဲ သူတို့ဟာ နောင် နှစ်ပေါင်း သန်းနဲ့ချီပြီး ဆက်ရေတွက်ဖို့ ရှိနေသေးတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာကို တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပံ္ပနဲ့ နည်းပညာ ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါစေ။